NEWS COLLECTION: November 2012
ဟင်္သာနီ (မွန်မြေ) | သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၂
ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေ စေတီ၌ သောကြာနေ့ ညနေ ၄ နာရီတွင် ဆန္ဒပြပွဲတခု စတင်ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းရပ်စဲရေးနှင့် ကြာသပတေးနေ့နံနက် အကြမ်းဖက်မှုအား ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချ သည့် အနေဖြင့် ကျင်းပရခြင်း ဖြစ် ကြောင်း ၎င်းဆန္ဒပြပွဲတွင် ပါဝင်သူတဦးက မဇ္ဈိမ သတင်းဌာနအား ညနေ ၄ နာရီခွဲခန့် တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဆူးလေမှာတော့ စနေပြီ။ သံဃာတော် အင်အား ၅ဝ လောက် ရှိနေပြီ။ လူအင်အားက ဟိုတစု ဒီတစုနဲ့ဆို ၁ဝဝ လောက် ရှိတယ်။ အခုမှ လူ စစုနေတာ။ ပိုစတာတွေ ထွက်မလာ သေးဘူး။ ဟိုနေ့(တနင်္လာနေ့)တုန်းက အဆက်ကို ကျနော်တို့ ပြန်ချမယ်” ဟု အမည်မဖော်လိုသူ ၎င်း ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။
ယင်းဆန္ဒပြပွဲသို့ရဟန်း သံဃာများ၊ တိုင်းရင်းသား လူငယ် ကွန်ယက်များ၊ ဗကသ အငယ် တန်းများ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိန်း ရေး အဖွဲ့များ၊ လက်ပံတောင်း သပိတ် ကော်မီတီ၊ လက်ပံတောင်း လူထု ညီလာခံ ကော်မီတီ များနှင့် မြေသိမ်း ခံရသည့် တောင်သူ လယ် သမား များ စသည့် အလွှာစုံမှ ပါဝင် ဆန္ဒ ပြရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု သိရှိရသည်။
“အခု ကျနော့် နောက်ကျောမှာလည်း ရဲတွေ ရှိတယ်။ အားလုံး ရဲအင်အား ၅ဝ လောက် ရှိတယ်။ မြို့တော်ခန်းမလုံခြုံရေးရဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ သေနတ် မပါဘူး။ ဒိုင်းလည်း မပါဘူး၊ နံပါတ်တုတ်တွေ ပါတယ်” ဟု ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်က ဆက် ပြောသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာခရိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအတွက် စီမံ ကိန်း ပတ်ဝန်းကျင်ရှိဝက်မှေး၊ ဆည် တည်း၊ ကန်တောနှင့် ဇီးတော စသည့် ရွာပေါင်း ၂၆ ရွာမှ လယ်မြေဧက၇၈၀၀ ကျော်သိမ်းဆည်း ခံထားရခြင်းကို မကျေနပ်ရာမှ စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေး ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုများ ယခုနှစ် မေလမှစ၍ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက် ထိုဒေသ၌ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်မှစတင်ကာ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထို့နောက် တင်းမာမှုများ အရှိန်မြင့်လာခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း မြေယာသိမ်းထားမှုများ ကြောင့် ချီတက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည့် မသွဲ့သွဲ့ဝင်း အပါအ၀င် ဒေသခံတချို့၊ အကူအညီ ပေးသူများကို အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီး ကာ မုံရွာအကျဉ်းထောင်တွင် ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီမှပုလဲမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်း လှိုင်၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ ကိုဂျင်မီ ပါဝင်သည့်အဖွဲ့တို့ကစစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသာအေးနှင့်ဆွေး နွေး ညှိနှိုင်းမှုများအပြီး ထိန်းသိမ်းထားသူများ ပြန်လည် လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။
သို့သော် လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်းကို တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်နေသည့် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ မြန်မာ့ ဦးပိုင် လီမိတက်နှင့် တရုတ် နိုင်ငံမှ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများနှင့် စီမံကိန်းဒေသရှိ ကျေးရွာသူရွာသားများအကြားညှိနှိုင်းမှုများအ ဆင်မပြေဆက် လက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် လက်ပံတောင်းတောင် အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီမှဦးဆောင် ကျင်းပသည့် လက်ပံတောင်း ပြည်သူ့ညီ လာခံတခုကို အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဆားလင်းကြီး မြို့နယ်၊ ဖောင်းကတာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆည်တည်းကျေးရွာ၌ ကျင်း ပခဲ့ သည်။
အဆိုပါ ညီလာခံသို့ လူအင်အား ၃ ထောင်ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြရာ စီမံကိန်းနယ်မြေ ဒေသမှ ရွာပေါင်း ၂၆ ရွာမှ ကျေးရွာကိုယ်စား လှယ် များ၊ သံဃာတော်များ၊ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များ၊နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်များ၊ လက်ပံတောင်း တောင် အရေး လေ့လာလိုသူများ၊ သတင်းမီဒီယာများလည်း ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ညီလာခံတွင် လက်ပံတောင်းတောင်အရေးအပြင် ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ငြိမ်း ချမ်းရေးနှင့် တရားမဝင် နေထိုင်နေကြ သော ဘင်္ဂါလီများအရေးတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီ၊ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များက အဆိုတင်သွင်း သုံးသပ်ဆွေးနွေးမှုများ ပြု လုပ်ခဲ့သည်။ ၂ ရက်တာ ကျင်းပခဲ့သည့် အဆိုပါ ညီလာခံမှ အများ သဘောတူညီချက် ၂၆ ချက်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်ပိုင်းတွင် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ၊ ၀မ်ပေါင် ကုမ္ပဏီတို့မှ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြောဆိုလာခဲ့သည့် အ တွက် လက်ပံတောင်း ဒေသခံများက ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်တန့်သည်အထိ ဆန္ဒပြမှုများ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ကြေညာကာ နေ့စဉ် ရက် ဆက် သရုပ်ပြဆန္ဒပြမှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ပိုင်း လက်ပံတောင်းအရေးသည် ပို၍ လူသိများလာခဲ့သည်။
အမေရိကန် သမ္မတ မစ္စတာ ဘားရက် အိုဘားမား၏ မြန်မာနိုင်ငံလာရောက်သည့် နေ့ဖြစ်သော နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် လက်ပံ တောင်း ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် ၀မ်ပေါင် ကုမ္ပဏီရှေ့နှင့် လယ်တီ ဆရာတော်ဘုရားကြီး သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့ရာ နေရာတို့တွင် သပိတ် စခန်း ၂ ခု စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ထိုမှတဆင့် မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ ပခုက္ကူ စသည့် ဒေသများမှ ရဟန်းသံဃာများလည်း သက်ဆိုင်ရာ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ၊ ဦးပိုင် လီမိတက်များ ကို လည်း ဒေသခံများက အကြမ်းမဖက်ရေး၊ အစိုးရကလည်း ဒေသခံများအပေါ် အကြမ်းမဖက်ရေးတို့ အတွက် သပိတ်စခန်းများတွင် လာ ရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
လက်ပံတောင်းအရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံး ကျင်းပသွားခဲ့သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် NLD ပါတီ ပုလဲမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရန် မေးမြန်းပြီး စုံစမ်းရေးကော်မရှင် တရပ်ဖွဲ့စည်းကာ စီမံကိန်း ဆက်လုပ်ရန် သင့်၊ မသင့် ကော်မရှင်က စုံစမ်းပြီး အဖြေရှာရေး ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာတစောင်ကို နိုဝင်ဘာ လ ၂၃ ရက် နေ့က တင်သွင်းခဲ့သည်။
၄င်း အဆိုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ကိုယ်စား ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင်က စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများကို သိမ်းဆည်း လယ်မြေများနှင့် ပတ်သက်၍ လျော်ကြေးလည်း ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဒေသခံများအတွက် အလုပ်အကိုင်များလည်း ဖန်တီးပေးခြင်း၊ အ စားထိုး နေရာသစ်များ ဖန်တီးပေးခြင်း စသည်တို့ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ စီမံကိန်းသည် မြန်မာ- တရုတ် ၂ နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ်ချုပ် ဆို လုပ်ကိုင်ထားသည့်အတွက် စာချုပ်အားတဖက်သတ် ဖျက်သိမ်းပါက နစ်နာကြေး ပေး ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ပွင့်လင်းစ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများ၏ ယုံကြည်မှု ပျက်ဆီးသွားနိုင်ပြီး တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာများ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်း ၍ မရကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြသွားခဲ့သည်။
သို့သော် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကလည်း တခဲနက်ထောက်ခံ၍ လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ရေး ပြည် သူ့လွှတ်တော်မှတဆင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို့ တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ထိုနေ့က အတည်ပြုခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က လက်ပံတောင်းအရေး ပြေလည်စေရန်အတွက် အဆိုပါ သပိတ်ခေါင်းဆောင်များ၊ သံဃာ တော်များနှင့် တွေ့ဆုံရန် သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ သွားရောက်ခဲ့ရာတွင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရပ် ဆိုင်းရန် အခက်အခဲရှိကြောင်း၊ စီမံကိန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် တရုတ်နိုင်ငံကိုလည်း ကြောက်ရကြောင်း၊ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း ရပ် တန့်လိုက် သည့်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံက စိတ်ဆိုးခဲ့ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် တိုင်းပြည်ပျက်သည့် အချိန်ကစပြီး ကူညီပေးခဲ့ သည့် အတွက် တရုတ်နိုင်ငံကလည်း ကျေးဇူးရှိသည့် နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြသူများ၏ လိုလားချက်များကို သမ္မထံ တင်ပြ ပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထိုသို့ပြောဆိုမှုနောက်ပိုင်း သပိတ်စခန်း ၅ ခု အထိ အင်အားများလာခဲ့ပြီး တင်းမာမှုများ ဆက် လက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က လည်း မုံရွာဒေသရှိ ဒေသခံများ၊ သပိတ်စခန်းများသို့ သွားရောက်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဦးပိုင်နှင့် ၀မ်ပေါင် ကုမ္ပဏီများသို့ ထိတွေ့ဆွေးနွေး မှု များလုပ်ကာ ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေး ကြိုးပမ်းမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ည ၁၂ နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး သပိတ်စခန်းများက ဖယ်ရှားပေးရန်၊ မဖယ် ရှား ပေးပါက တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည်ဟု အမိန့်ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
ထိုသို့ ကြေညာအပြီး ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ဝင်းထဲမှ အသံချဲ့စက်ဖြင့် သပိတ်စခန်းများသို့ သတိပေး ကြေညာပြီးနောက် သံဃာများနှင့်ရဲများ တင်း မာမှုဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ရဲများနောက်ဆုတ်သွားခဲ့သည်။
သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မုံရွာမြို့ကို ရောက်ရှိမည့် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက် ၃ နာရီ ခန့်တွင် ၀မ်ပေါင် ကုမ္ပဏီ အနီးဝန်း ကျင်ရှိ သပိတ်စခန်းများကို ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ၀န်းထဲတွင် လုံခြုံရေး တာဝန်ယူထားကြသည့် လုံထိန်း ရဲများက မီးသတ်ပိုက်များသုံး၍ ဖြိုခွဲ၊ မျက်ရည် ယိုဗုံး သုံးခြင်းဖြင့် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထိုကဲ့သို့ အင်အားသုံး ဖြိုခွဲလိုက်ခြင်းကြောင့် သပိတ်စခန်းများရှိ သံဃာများ၊ ဆန္ဒပြသူများ ထိုခိုက်ဒဏ်ရာများ ရရှိကြကာ ရ ဟန်း သံဃာများ အပါအ၀င် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူ အနည်းဆုံး ၇၀ ကျော်ရှိပြီး ထိုအထဲတွင် လူနာ ၂၀ ဦးသည် စိုးရိမ်ရသည့်အခြေအနေ ရှိ ကြောင်း၊ သံဃာ ၂ ပါး မန္တလေး ဆေးရုံသို့ ဆေးကုသခံယူရန် အရေးပေါ် ပို့ခဲ့ရသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် သမ္မတရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့မှ ဆန္ဒပြမှုကို ဖြိုခွဲမှုသည် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကျကျ နိုင်ငံတ ကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ အရေုးယူ ဖြိုခွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးကိုသာ သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပြီး မီးလောင်ဗုံး မသုံး စွဲခဲ့ ကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော် အဆိုပါကြေညာချက်ကို နာရီပိုင်းအတွင်း ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည်လည်း ထိုနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မုံရွာမြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူများနှင့် သွား ရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် မုံရွာ လူထုကို လက်ပံတောင်းအရေး ပြေလည်အောင် ကြိုးစားမည်ဟု မိန့်ခွန်းတရပ် ပြော ကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် မုံရွာဆေးရုံသို့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရ၍ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသွားကြသူများကို သွားရောက်တွေ့ဆုံ အားပေး စကားပြောကြားခဲ့ သည်။ ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင်လည်း မလိုအပ်ဘဲ အကြမ်းဖက် ဖြေရှင်းခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန် ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမည်ဟု နောက်ထပ် မိန့်ခွန်းတရပ် ပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် တည်းခိုရာ ဟိုတယ်တွင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်တန့်ရေး သပိတ်ခေါင်းဆောင် မသွဲ့သွဲ့ဝင်း အပါအ၀င် ဒေသခံ ရွာ သူ၊ ရွာသားများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
သပိတ် စတဲ့ ၁၉ ရက်နေ့ကတည်းက ဦးဇင်းတို့ရောက်နေတာ။ ပထမတော့ ၀မ်ပေါင်ဂိတ်မှာ၊ နောက်ပိုင်း အကျော်ဂိတ်မှာပေါ့ဦးဇင်း က တပေါင်းလမှာ စာမေးပွဲဖြေမှာ အစိုးရစစ် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲပြီးမှ ဘုန်းကြီးစာမေးပွဲ ဖြေရတာကိုး။ အခုက စာကျက်ရင်း တန်းလန်းပေါ့။ ဒီနှစ်တော့ စာမေးပွဲ မဖြေနိုင်ဖို့ များပါတယ်။
ပထမဆုံး မီးသတ်ပိုက်နဲ့ ဦးဇင်းတို့ကို မကွဲကွဲအောင် လုပ်တယ်။ မရတဲ့အဆုံးတော့ မျက်ရည်ယိုဗုံး ပစ်တယ်။ ဦးဇင်းတို့က ဘာမှ ပြန်မ လုပ်ဘူး၊ မေတ္တာသုတ်ပဲ ရွတ်နေတာ။
မီးသတ်ပိုက်နဲ့ ပက်တာအားမရလို့ မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ပစ်တယ်၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ ပစ်တာအားမရလို့ နောက်ဆုံးပိတ် မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း လူတ ကိုယ်လုံး မီးလောင်စေတတ်တဲ့ မီးကျည်နဲ့ပစ်တယ်။
ဦးဇင်းတို့က သူတို့ကို ပြန်ပြီးတုန့်ပြန်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူးလေ။ သူတို့ လုပ်ချင်သလိုလုပ် ကားနဲ့ နင်းချင်နင်းပါစေ ဆိုပြီးနေကြတာကိုး။ ခေါင်းကိုအောက်စိုက်ပြီး မေတ္တာသုတ် ရွတ်နေစဉ်မှာပဲ တကိုယ်လုံး မီးလောင်နေပြီ ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ဒါနဲ့ ဦးဇင်းလည်း သင်္ကန်း ကို ချွတ်လိုက်တဲ့အချိန် ခြေထောက်က အသားဖတ်တွေ ကွာနေပြီးမျက်လုံး လည်း အခုလို ဖြစ်သွားတာပဲ။
အခင်းဖြစ်တဲ့အချိန် လမ်းလယ်ခေါင်မှာ အပေါင်းအပါတွေနဲ့ ထိုင်နေတာ၊ သူတို့လာလို့ သပိတ်စခန်း ကျော်ရင်ကျော်၊ ကားနဲ့နင်းမယ်ဆို လည်း နင်းပြီး ကျော်ပါစေဆိုပြီး ထိုင်နေကြတာ မျက်လုံးက မီးလောင်ပြီးကတည်းက အခုထိ ဖွင့်မရဘူး မျက်လုံးက မို့သွားတော့ မမြင် ရဘူးဖြစ်နေတာ။ မျက်လုံး အသားစပ်တာတော့ မရှိပါဘူး။
ဦးဇင်း မမှတ်မိတော့ဘူး။ အကျော်ရွာကနေ အိမ်တအိမ်၊ အဲဒီကနေ ကားစီးပြီး ဆိပ်ကမ်းရောက်တော့ သတိမရတော့ဘူး။အခင်းမဖြစ်ခင် ပထမတော့ အိပ်နေကြတာ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်လာက်မှာ သိတာပဲ။ သူတို့လှုပ်ရှားတာ မနက် ၂ နာရီကမှ စတာ
ဦးဇင်းအနေနဲ့ကတော့ ရပ်ဆိုင်းလေ ပိုကောင်းလေ၊ မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံလို့ပြောတာလေ၊ သာသနိက အဆောက်အအုံတွေ ကို ထိန်းရမှာ မဟုတ်လား။ အခုက သိမ်နဲ့ကျောင်း၊ ကျောင်းက ထားလိုက်ပါတော့ ပျက်ဆီးသွားပြီ။ဘုရားနဲ့သိမ်ကို ဖျက်ဆီးတော့မှာ။ ဒါ ကို ဦးဇင်းတို့က လက်ပိုက် မကြည့်နိုင်ဘူး။ တမျိုးသားလုံး မျိုးကောင်းစားဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လို တမျိုးသားလုံး ကောင်းစားဖို့လဲ။
စီမံကိန်းတွေက ကောင်းပါတယ် သူများကို မထိခိုက်တဲ့ စီမံကိန်းမျိုးက ကောင်းပါတယ်။ အခုက အကုန်လုံးကို ထိခိုက်နေတယ်။ ပြည် သူတွေ၊ နယ်ခံတွေကို ထိခိုက်နေတယ်လေ။ စီမံကိန်း လုပ်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေကနေ သဘောတူ၏၊ မတူ၏တော့ မေးသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဘာသာ အမွေအနှစ်၊ တန်ဖိုးထားရမယ့်ဟာတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အခုက ဘုရား သားတော်တင် မဟုတ် ဘူး၊ လူရော၊ ရဟန်းရော ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုပါတယ်။
အခုလက်ရှိ ကတော့ တကိုယ်လုံး မီးရှို့သလိုပေါ့၊ ပူတာပေါ့၊ စဖြစ်ကာစတော့ လမ်းလျှောက်လိုက်သေးတယ်။ မီးလောင်တာတော့ သိ တယ်၊ ဒီလောက် ဆိုးမယ် မထင်ဘူး။ နောက်တော့ မလျှောက်နိုင်တော့ဘူး။
အခု ဦးဇင်းဒီလိုဖြစ်တာ ဦးဇင်းခမည်းတော်တွေ၊ မယ်တော်တွေ မသိပါဘူး။ ဦးဇင်းဒကာတွေ၊ ဒကာမတွေ ကိုလည်း ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ် စေချင်လို့ မပြောပြပါဘူး။ ဘယ်နေ့ ဆေးရုံဆင်းရမတုန်း ဆိုတာကတော့ ဆရာဝန်နဲ့ စကား မပြောရသေးလို့ သေချာမသိရသေးဘူး။
လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း သပိတ်စခန်းများဖြိုခွင်းခံရမှု၌ ဒဏ်ရာရရှိပြီး ဆေးရုံတင်ထားရသော သံဃာအများစုနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် များ ၏ မီးလောင်ဒဏ်ရာများမှာ ကူးစက်ပိုးဝင်နိုင်သည်ဟု သက်ဆိုင်သူများက စိုးရိမ်နေရကြောင်း သိရသည်။
နောက်ဆုံးသိရသော သတင်းများအရ မုံရွာပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးတွင် သံဃာတော် ၂၇ ပါး၊ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးနှင့် မန္တလေး ပြည်သူ့ ဆေးရုံ ကြီး တွင် သံဃာတော် ၂ ပါး တို့မှာ မီးလောင်ဒဏ်ရာများကြောင့် အပေါ်ယံအရေပြားများကွာကျထားသည်။
ဒဏ်ရာရ သံဃာတော် ဦးသိက္ခညာဏ ၏ သားဖြစ်သူ တိမွေးကု ဆရာဝန် ဒေါက်တာ နေသူရိန်က ဧရာဝတီသို့ ပြောရာတွင် “မီးလောင် ဒဏ် ရာတွေက မသေစေနိုင်ပေမယ့်၊ သူက ခန္ဓာကိုယ်ကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ အရေပြားတွေ ကွာကျထားတော့ အကာရံမရှိတော့ပဲ ပိုး တွေက အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံး မလှုပ်ရှားနိုင်တော့တဲ့အနေ အထား ကနေ အသက်ဆုံးပါးသွားနိုင်တဲ့ အနေအထားထိစိုး ရိမ်ရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မန္တလေးဆေးရုံကြီးတွင် အရေးပေါ်လူနာအဖြစ် ဆေးကုသမှု ခံယူလျက်ရှိသော ဆရာတော် ဦးသိက္ခညာဏ မှာ ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံး၏ ၄၅ ရာ ခိုင်နှုန်းတွင် မီးလောင်ဒဏ်ရာများကြောင့် အရေပြားများကွာကျနေပြီး ၎င်းအား သီးသန့်ခန်းဖြင့် ထားရှိခွင့် ရသော်လည်း အဆိုပါအ ခန်း သည် ပိုးသတ်ဆေးများဖြန်းထားခြင်း မရှိသကဲ့သို့ သန့်ရှင်းမှုလည်းအားနည်းကြောင်း အကယ်၍ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ ကုသလိုကြောင်း ဆေးရုံအုပ်ထံတောင်းဆိုသွားမည်ဟုဆိုသည်။
အလားတူ ဆရာတော် ဦးသိက္ခညာဏ နှင့် အတူ လက်ပတောင်းဖြိုခွင်းမှုတွင် ဒဏ်ရာအပြင်းထန် ရရှိခဲ့သူ ဆရာတော် ဦးဝိသုတ္တ မန္တ လေး ဆေးရုံကြီးတွင် သီးသန့်ခန်းတွင်ထားရှိခွင့်မရဘဲ ပြင်ပလူနာများဖြင့် ပူးတွဲထားရှိသဖြင့် ပိုမိုစိုးရိမ်ရကြောင်း မုံရွာ ဆေးရုံ ကြီး တွင် ကုသမှု ခံယူလျက်ရှိသော သံဃာတော်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လည်း စိုးရိမ်ရကြောင်း ဒေါက်တာ နေသူရိန် က ဆက်ပြော သည်။
“မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေကနေ ရောဂါပိုးတွေဝင်ခဲ့ရင် သွေးအဆိပ်သင့်ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်က အဆင် မပြေဖြစ်လာခဲ့မယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် အတွင်းထဲက ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေက အလုပ်မလုပ်နိုင် မစားနိုင်မသောက်နိုင်ဖြစ်ပြီး တော့ အသက်အန္တရယ်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီလိုဒဏ်ရာရရှိသူတွေကို ရောဂါပိုးမွှားကင်းစင်တဲ့ သီးသန့် တစ်နေရာမှာ တလ လောက်ထားပြီးကုသနိုင်တဲ့ နေရာတစ်နေ ရာ ဖန်တီးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ဆရာတော် ဦးဝိသုတ္တကို စောင့်ကြည့်ပေးနေသူ အရှင် စန္ဒဒန ကလည်း “ဦးဝိသုတ္တက အောက်ပိုင်း တပိုင်းလုံး မီးလောင်ဒဏ်ရာနဲ့ အရေပြား တွေကွာကျထားတာပေါ့၊ မနေ့ကတည်းက သီးသန့်ခန်း ရဖို့ ဆေးရုံကိုပြောပါတယ်၊ အခန်းမရှိ တော့ဘူးလို့ ဆေးရုံက ပြောလို့ ဒီအများထား တဲ့နေရာမှာပဲ ရောပြီး ကုထားပါတယ်၊ ဆေးရုံ ကတော့ ဒီဒဏ်ရာကို အရေးတကြီးရောဂါလို့ သတ်မှတ်ပုံ မရဘူး” ဟု ဧရာဝတီသို့ မိန့်ကြား သည်။
အလားတူ မုံရွာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင်လည်း သံဃာ ၂၇ ပါးနှင့် ကိုကျော်စွာမိုးတို့ မှာ မီးလောင်ဒဏ်ရာများနှင့် ဆေးကုသမှု ခံယူနေ လျက် ရှိပြီး သံဃာအချို့ကို ပြင်ပလူနာများဖြင့် အတူထားရှိပြီး ကုသနေသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း မုံရွာဆေးရုံကြီးတွင် သံဃာတော်များကို သွားရောက် ကြည့်ရှုသူ NLD ပါတီဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“အသက်အန္တရာယ်ကတော့ အကုန်လုံးလို စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ဘူးလို့ ပြောရမယ်၊ သံဃာအများစုက တော့ သီးသန့်ခန်း တွေမှာထားကုပေး ထားတယ်၊ မျက်စိတစ်ဖက် ထိခိုက်ထားတဲ့ ကိုယ်တော်တစ်ပါးနဲ့ ၃ ပါးပဲ အပြင်လူနာတွေနဲ့ရော ထားတာရှိတယ်၊ ဒီကအခန်းတွေ ကလည်း ပိုးသတ်ထားတာမရှိတော့ ပိုးဝင်မဝင်တော့မသိဘူး” ဟု သူက ဧရာဝတီသို့ပြော သည်။
မုံရွာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင်ကုသနေသော သံဃာတော်များကို ယင်းဒေသကိုရောက်ရှိနေသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယနေ့မနက်တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံကာ အားပေးစကားပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆောင်းကာလ ရာသီဥတုကြောင့် မီးလောင်ဒဏ်ရာများမှာ နာကျင်ကိုက်ခဲကြောင်း မျက်နှာနှင့် ခန္ဓာကိုယ် ဘယ်ဘက်တစ်ခြမ်း မီးလောင် ဒဏ် ရာ ရရှိခဲ့သူ လက်ပံတောင်းဒေသခံ မဖြူဖြူဝင်း က ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။ ၎င်းအနေဖြင့် ဆေးပညာဗဟုသုတ မရှိသဖြင့် ဒဏ်ရာ များ ကို အပြင်ဆေးခန်းတွင်ပင် ကုသမှုခံယူနေကြောင်း ထပ်လောင်းပြောဆိုသည်။
ယခုလ၂၉ ရက်နေ့မနက် ၃ နာရီခန့်က လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းရေး ဆန္ဒပြနေသည့် သပိတ်စခန်းများကို အစိုးရ အာ ဏာပိုင်များက မီးသတ်ပိုတ်၊ မျက်ရည်ယိုဗုံး၊ မီးလောင်ဗုံးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားများဖြင့် အသုံးပြုဖြိုခွဲရာတွင် သံဃာတော် အပါး ၇၀ ကျော် နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၅၀ ကျော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အင်အားသုံးဝင်ရောက် စီးနင်းခဲ့သော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သံဃာ ၇ ပါးအပါအဝင်လူပုဂ္ဂိုလ် အချို့ကို ရိုက်နက် ဖမ်းဆီးကာ ထို သံ ဃာတော်များကို ယမန်နေ့ညနေပိုင်းက ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးများ လူငယ်တွေအကြား တော်တော် များများ သုံးစွဲနေပြီးဖြစ်လို့ မိ ဘ များက စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဖြစ်နေကြလို့ နှစ်ခြင်းဘုရားဝတ်ပြုသည့် နေ့အချိန်တိုင်းနှင့် အစည်းအဝေးတိုင်းတွေမှာ ရင်ဖွင့်သံများ ကြားနေရပါ တယ်။
မိဘတွေ သားသမီးအတွက် ရင်လေးနေရကြရပြီဖြစ်လို့ သက်ဆိုင်ရာ မိမိကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးများ ၊ သာသနာဆရာ တော် များထံ ဘုရားဆုတောင်း ဝတ်ပြုပေးတာတွေ ဒီးမော့ဆိုမြို့မှာ မကြာခဏဆိုသလို လုပ်ပေးနေ တာတွေ တွေ့နေ ရပါတယ်။
ဒီးမော့ဆိုမြို့မှ နှစ်ခြင်းသာသနာဆရာများနှင့် နီးစပ်သူတဦးက “သူတို့တွေက ဘာမှသုံးစားလို့ မရ တော့တဲ့ အခြေအနေမှာ ဖြစ်နေ ကြပြီ လေး အဲဒါဆိုတော့ မိဘတွေက ရင်လာဖွင့်ကြတယ်။ မိဘတွေရဲ့ လုပ်ငန်းတွေဆိုလည်း သူတို့ရဲ့ သားတွေကို လက်လွှဲပေးတာတွေ မလုပ် ရဲတော့ဘူး အလုပ်ကိုမခိုင်းရဲတော့ဘူး သူတို့က ရသမျှငွေတွေကို အဲဒီဆေးအတွက် မရမက ဝယ်တော့တာ မိဘတွေက စိတ်ဆင်းရဲ နေကြရတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီးမော့ဆိုမြို့အပါအဝင် ကျေးလက်တောရွာဘက်တွေမှာလည်း မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲ နေမှုရှိနေကြပါတယ်။ နန်းမယ်ခုံတိုက်နယ် ဘက် တွေ မှာ ရှိတဲ့ နန်းမယ်ခုံဈေး အနောက်ဘက်ခြုံကြားတွေနဲ့ နန်းစခန်း (၁)ချိုးကုန်းတောတွေမှာ လူငယ်တွေ အဲဒီထဲမှာ သုံးစွဲနေကြ တယ်လို့ ကျေး ရွာအုပ်စုဥက္ကဌတွေအကြား သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
နန်းမယ်ခုံတိုက်နယ်က ကျေးရွာဥက္ကဌတဦးက “အဲဒီခြုံတွေထဲမှာ ဆီးကရက်ခွံတွေ ၊ ဝါးပြောင်းခွံတွေ သူတို့ သုံးထားတဲ့ ခြေရာလက်ရာ တွေ တွေ့ရတယ်။ တချို့ ဖမ်းလည်းဖမ်းမိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မိဘတွေက သူတို့သားအခြေအနေ ဘာမှ သုံးမရတော့လို့ တချို့မိဘ တွေဆို သတ်တောင်သတ်ခိုင်းလိုက်တယ် အဲဒီလောက်အထိ အဖြစ်ဆိုးနေကြတာ။ ” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ ကြုံတွေ့နေကြရလို့ မိဘပြည်သူတွေက လူငယ်တွေအကြား မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတာတွေ ပိုပြီးကူးစက်ပျံ့နှံ့လာမှာ ကို စိုးရိမ် ကြောက်ကျနေကြရလို့ ဘာသာရေးအစည်းအဝေးတွေ၊ ကျေးရွာအစည်း အဝေးတွေမှာ ပြောဆိုဆွေးနွေး လာကြပါတယ်။ ထို့ အပြင် မိဘတွေကိုယ်တိုင်က ဆုံးမလို့ မရနိုင်တော့တဲ့ သူတို့သားတွေကို နီးစပ်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း တိုင်ကြားလာကြတယ် လို့ သိရပါ တယ်။
နန်းမယ်ခုံတိုက်နယ် က.လ.လ.တ အဖွဲ့အစည်းမှ နာယက ဆရာ ဦးဟာမော်က “လူငယ်တွေတော် တော်များများက အဝေးမှာ အလုပ်သွား လုပ်ကြတာ အဲဒီမှာ သုံးတတ်လာကြတယ် ဒီပြန်ရောက်တော့ ပြန်လာသုံးကြတာပေါ့ အဲဒီကနေ လူငယ်တွေကြား ပြန့်လာတယ်။ ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့ မရဘူး ဆေးတွေက ဘယ်ကနေဘယ်လိုတွေ ပါလာသလဲဆိုတာတောင် မသိရဘူး။ အဲဒါတွေနဲ့ပဲ အခုသလော ပြော လာတာ တွေများလို့ လိုက်ဖြေရှင်းနေရတာနဲ့ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်နေရတာပါ” လို့ ပြောပါ တယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ သုံးစွဲလာကြတဲ့လူငယ်တွေအကြားနဲ့ ထပ်မံမပြန့်ပွားအောင် တိုက်ဖျက်ဖို့ဆိုတာကကယားပြည်နယ်တစ်ပြည်နယ် တည်း တခုတည်းနဲ့ တိုက်ဖျက်လို့မရကြောင်း မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုလုံးဝမရှိတော့မှသာလျှင် မူးယစ် ဆေး ဝါး သုံးစွဲမှု နည်းလာမည်ဖြစ်တယ်လို့ ဆရာ ဦးဟာမော်က ဆက်ပြောပါတယ်။
လာမည့်ဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်း၌ ပြည်ထောင် စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုဉက္ကဌ ၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း UW SA ဝ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် ဌာနချုပ်သို့ထံသွားရောက်လည်ပတ် မည်ဟု ဝခေါင်းဆောင်ပိုင်းနှင့် နီးစပ်သည့်အ သိုင်း အဝိုင်း ကပြောပါသည်။
“ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်လို့ပြောတယ်။ အတိအကျလို့တော့ပြောလို့မရသေးဘူး။ ရက်နီးမှပြန် အကြောင်း ကြားမယ်ပြောတယ်။ ဦးအောင်မင်းတို့ ကျ နော်တို့ဆီကို ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံခြင်းဘဲ” ဟု ဝ အကြီးအကဲ တဦးက ပြော ပါသည်။
ဝ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် UWSA သည် မြန်မာအစိုးရနှင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံ ဆွေး နွေးပြီးသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ဆွေးနွေးပွဲ သုံးကြိမ်စလုံးကို ဝ နှင့်နီးစပ်သည်ဟုနာမည်ကြီးသည့် ဦးအောင်သောင်းဘက်မှ ဦးဆောင် ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။
ယမန်နှစ်အတွင်း စက်တင်ဘာလ ၆ ရက် တွင် ပဏာမအပစ်ရပ်ရေးအဆင့်၊ အောက်တိုဘာ လ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုမှ မခွဲထွက် ရေး အပါအဝင် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအစ ရှိပါသည့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပထမ အကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ကြ၏။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက် ပြည် ထောင်စု အဆင့် ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုမှာမူ လွှတ်တော် ၃ ရပ်၌ ဝ ကိုယ်စားပြုလွှတ်တော် အမတ် ထားရှိရေး စသဖြင့် ဆွေးနွေး ထားခဲ့ဖူး ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့် တတိယအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲတွင် သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေး နွေးရန် စီစဉ်ထား ကြောင်း ဝ အရာရှိအ သိုင်း အဝိုင်းက သျှမ်းသံတော်ဆင့်အား ပြောပြဖူးပါ သည်။ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုလ လယ် ရမခတိုင်းမှူးနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ကြိုးနီခတ်မှု လျော့ လာ သည်ကိုတွေ့ရကြောင်း ၎င်းက ပြန်လည်ပြောပြပါသည်။
“ရမခတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် အောင်စိုး နဲ့ ကျနော်တို့ ဝ အကြီးအကဲတွေဖြစ်တဲ့ ဒု ဥက္ကဌရှောက် မင်လျှံ၊ ကျောက်ကော် အန်း၊ လီဂျူးလျဲ့ ခေါ် ဦး အောင်မြင့် ၊ ဒု စစ်ဦးစီးချုပ် တာ့အိုက်လွန်း တို့ တန့်ယန်းမှာ တွေ့ဆုံတုန်းက တိုင်းမှူးက ပြော တယ်။ ခုချိန်ကစပြီး ရိက္ခာသယ်ဖို့ကိစ္စ၊ ဘာဘာ ညာညာသယ်ဖို့ ကိစ္စတွေဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာဌာန ဆီကိုဘဲ တိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုချက် တောင်း ပါ။ စစ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ သူနဲ့တိုက် ရိုက်ဆိုင်တဲ့သဘော။ တိုင်းမှူး က လူကြီးလုံခြုံရေးအတွက်ဆို လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ တွေကို လားရှိုးသို့ ဘာသို့ မြို့ကြီးတွေအထိလဲသွားလာ လို့ ရတယ် ပြောတယ်။ ဆိုတော့ ဒီဟာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကြိုးနီခတ်မှုလျော့ လာတယ်လို့ ပြောလို့ရ တယ်” - ဟု သျှမ်းသံတော် ဆင့် အားပြောပြသည်။
ယခုတကြိမ် အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုဥက္ကဌဦးအောင်မင်း နှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် မည်သည့်အချက်အပေါ် အ ခြေ ခံ၍ဆွေးနွေးသွားမည် ဟူသည့်အချက်ကိုမူ သျှမ်းသံတော်ဆင့်မှ စုံစမ်းနေဆဲဖြစ် ပါသည်။
ကားတိမ်းမှောက်၍ ရေနံနှင့် ဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းမှ တရုတ် ၃ ဦး သေဆုံး
မန္တလေးတိုင်း နွားထိုးကြီးမြို့နယ်တွင် ကားတိမ်းမှောက်ရာမှ ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းမှ တရုတ် အမျိုးသား (၃) ဦး သေဆုံးသွား ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
နိုဝင်္ဘာလ ၂၈ ရက်ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာ အရ သေဆုံးသွားသူများမှာလာ ဒကီ (၄၂) နှစ်၊ မစ္စ တာ ချိုင်ဂျော့လိူင် (၃၇) နှစ်နှင့် မစ္စတာ မာဖူး (၅၈) နှစ် တို့ ဖြစ်ကြသည်ဟု သိရသည်။
နိုဝင်္ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီကျော်တွင် ရန်ကုန်မှ မန္တလေးသို့ ဒရိုင် ဘာ ဇော်မင်းချန် မောင်းနှင် လာသော ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ဆက်သွယ် ရေး လုပ်ငန်းမှ ပါဂျဲရိုး ယာဉ် အမှတ် ၅၈ သည် မိုင်တိုင် အမှတ် ၃၁၂⁄၈ အနီး အရောက်တွင် ကားဝဲဘက် ဘီး ပေါက်ကာ အရှိန်လွန်ပြီး တိမ်း မှောက်သွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ကားဒရိုင်ဘာ ဇော်မင်းချန် (၃၈) နှစ်နှင့် နောက်တရုတ် အမျိုးသား တစ်ဦးဖြစ်သူ ယောင်ရှားတောင် (၃၅) နှစ်တို့မှာ ပြင်းထန်စွာ ဒဏ် ရာ ရရှိ သွားပြီး မန္တလေး ဆေးရုံကြီးတွင် အတွင်း လူနာ အဖြစ် တင်ထားရသည်ဟု သိရသည်။
နေမျိုး | သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၂
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သောကြာနေ့ နံနက်ပိုင်းက ချင်းတွင်းမြစ် သောင်ပြင်တွင်လူထုပရိသတ်သုံး ထောင် ကျော်ကို နာရီဝက်ကြာ မိန့်ခွန်းတရပ် ပြောကြားခဲ့သည်။
မနက် ၉ နာရီခန့်မှ စတင်ခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းထဲတွင် တိုင်းပြည်၏ ရေရှည်အကျိုးကို ကြည့်ပြီး ကြေးနီစီမံကိန်း ပြဿနာအား ဖြေရှင်းမယ်ဟု ပြော ကြားသွားသည်။
ကြေးနီစီမံကိန်းတွင် ဦးပိုင်လီမိတက် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လာရောက် နားထောင်သောပရိသတ်များထဲမှမေးခွန်း ထုတ် ကြောင်း မဇ္ဈိမ သတင်းထောက်က ပြောသည်။
“ပရိသတ်က မေးခွန်းတခု မေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ရှိလျက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ ဒီကြေးနီစီမံကိန်းဟာဦးပိုင်လီမိတက်လက် အောက် ရောက်သွားတာလဲ လို့ မေးတယ်ဗျ။ အဲဒါကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က အာဏာ ပိုင်တွေကို ပြည်သူတွေကနေ ကျမကို ဒီမေးခွန်း မေးတယ်လို့ ပြောမယ်ဟု ဖြေကြားတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ထို့အပြင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံနေထိုင်ရမည့် အကြောင်းလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မိန့်ခွန်းထဲတွင် ပြော ဆို သွားသည်။
ဆက်လက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အာဏာပိုင်များ၊ ဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံနေကြောင်း သိရှိရသည်။
တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံတွေအပေါ် မှီခိုမှု ပိုများလာပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အဲ့ဒီ နိုင်ငံတွေအပေါ် မှီခိုမှု လျော့ပါးသွားတာမို့ တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဗျူဟာမြောက် အားထားရမှု ကြီးမား လာလိမ့်မယ်လို့ လာမယ့် ဆယ်စုနှစ် ၂ စုအတွင်း ရေနံထုတ်လုပ်မှုနဲ့ သုံးစွဲမှု အလားအလာဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ စွမ်းအင်အေဂျင်စီ (International Energy Agency – IEA)ရဲ့ အကဲဖြတ်ချက် အသစ်ထဲမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
မနှစ်တုန်းက တရုတ်နိုင်ငံထဲ ရေနံတင်ပို့မှုမှာ အီရတ်က ၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါခဲ့တာပါ။ တနေ့ကို ရေနံ စည် ပေါင်း ၂၇၅၀၀၀ ဝန်းကျင် တင်ပို့ခဲ့ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီတင်ပို့မှုနှုန်းက ၂၀၃၅ ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါ တနေ့ကို ရေနံ စည်ပေါင်း ၈ သန်းကျော်အထိ များပြားသွားလိမ့်မယ် လို့ IEA ရဲ့ စီးပွားရေးပညာရှင် ဖာတီ ဘီရိုလ် (Fatih Birol) က သုံးစွဲမှုအလားအလာဆိုင်ရာ လေ့လာချက်တခုထဲမှာ ကြိုတင်ခန့်မှန်း ထားပါတယ်။ ဒီနှုန်းဟာ ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံက နေ တင်သွင်းမှုရဲ့ အထက်ကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီအခြေအနေမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အရှေ့အလယ်ပိုင်း ရေနံထွက်ရာဒေသတွေနဲ့ တရုတ် ရေနံချက်စက်ရုံအတွက် ကြားခံ သယ်ယူပို့ဆောင် ရေး လမ်းကြောင်းအဖြစ် အရေးပါနေတာပါပဲ။
အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင် ယူနန်ပြည်ထဲကို သွယ်တန်းမယ့် ရေနံပိုက် လိုင်းတခုကို တရုတ် အမျိုး သား ရေနံကော်ပိုရေးရှင်း (Chinese National Petroleum Corporation – CNPC) က ဦးဆောင်ပြီး တည်ဆောက်နေပါတယ်။ ဒီပိုက် လိုင်းဟာ ရှေ့နှစ်အလယ်ဝန်းကျင်ဆိုရင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းက ရေနံ တွေကို စတင် စုပ်ယူတော့မှာပါ။
လုပ်ငန်းအခြေကျသွားတဲ့အခါ အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းက တနှစ်ကို ရေနံစိမ်း မက်ထရစ်တန်ပေါင်း ၂၃ သန်းအထိ သယ် ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ပီ ကင်း အခြေစိုက် ဂလိုဘယ်လ်တိုင်းမ်စ် သတင်းစာ (Global Times) က ရေးသား တင် ပြခဲ့ပါတယ်။ မက်ထရစ်တန် ၂၃ သန်းဆိုတာ ဟာ သိပ်ကြီးမားလှတဲ့ ပမာဏတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒီတင်ပို့ မှုဟာ လာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာ အဲ့ဒီပမာဏထက် အများကြီး ပိုကြီးတဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက ရေနံစိမ်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံကနေဖြတ်ပြီး တင်ပို့မယ့် ရှေ့ပြေးအရိပ်အယောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
“တကယ်လို့ ပိုက်လိုင်းအစီအစဉ်ဟာ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ဒေသတချို့မှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ လက်နက်ကိုင်အင်အား စုတွေ နှောက်ယှက် တာ မခံရဘူးဆိုရင် တရုတ် အမျိုးသားရေနံကုမ္ပဏီတွေ (National Oil Companies – NOCs) မြန်မာပြည်ကို ဖြတ်ပြီး ပိုက်လိုင်းတွေ ပိုဆောက် လာနိုင်တဲ့ အလားအလာ အတော်လေးရှိပါတယ်” လို့ ဒေသဆိုင်ရာ စွမ်းအင်လုပ် ငန်း လေ့လာသုံးသပ်သူ ကောလင်း ရေးနိုးစ် (Collin Reynolds) က ပြောပါတယ်။
“တကယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံက အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကနေ ရေနံတင်ပို့မှုကို တိုးမြှင့်မယ်ဆိုရင် မာလက်ကာ ရေလက်ကြားကို ဖြတ်ပြီး သယ်ဆောင်ရတဲ့ လမ်းကြောင်းရဲ့အန္တရာယ်ကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ ဘာဘဲလုပ်ရလုပ်ရ လုပ်ချင်ပါလိမ့် မယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း အခြားရွေး ချယ် စရာ နည်းလမ်းတခုအနေနဲ့ တရုတ်တွေက မြန်မာပြည်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ခဲ့တာပေါ့။ အခု လမ်းကြောင်းကိုလည်း သူတို့ကကာကွယ်ချင် မှာပဲလေ” လို့ သူက ဆိုပါသေးတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ ထဲမှာ တရုတ်ရေတပ်သင်္ဘောတွေ ပိုများလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
CNPC နဲ့ တရုတ်အမျိုးသား ကမ်းလွန်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်း (China National Offshore Oil Corporation) ဟာ အီရတ် ရေနံတွင်းတွေ မှာ ဒေါ်လာ ဘီလီယံနဲ့ချီပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြတယ်လို့လည်း IEA က ပြောပါတယ်။ ဒီလို ရင်းနှီး မြှုပ်နှံနေတဲ့အတွက် အီရတ်နိုင်ငံဟာ မကြာခင် မှာ တရုတ်နိုင်ငံက ရေနံအများဆုံးဝယ်ယူတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံပြီးရင် ဒုတိယအများဆုံး ရေနံထုတ်လုပ်သူအ ဖြစ်ပေါ်ထွက် လာဖို့ ဦးတည်နေတယ်လို့လည်း အဲ့ဒီအဖွဲ့က ဆိုပါ တယ်။
“တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ အီရတ်ကနေ ရေနံတွေ တစထက်တစ ပိုများပြီး တင်သွင်းမယ်ဆိုတာ သိပ် ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင် အဲ့ဒီလို တင်သွင်းတာ ဟာ တရုတ်နိုင်ငံအတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိစေပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် လောလောဆယ်မှာ အီ ရတ်က အတော်လေး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိပေမယ့် ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုလည်း ကျနော်တို့ နားလည် သဘောပေါက်ထားသင့်ပါတယ်” လို့ Xiamen တက္ကသိုလ်က တရုတ်နိုင်ငံ စွမ်းအင်စီးပွားရေး သုတေသနစင်တာရဲ့ ဒါရိုက်တာ လင်ဘိုကီယန်င် (Lin Boqiang) ကတရုတ် နေ့စဉ် (China Daily) သတင်းစာကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်း ရေနံထုတ်လုပ်မှုဟာ ၂၀၂၀ မှာ အများဆုံးဖြစ်လာနိုင်ပြီး တနှစ်ကို တန်ပေါင်း ၂၂၀ သန်း လောက် ထုတ်နိုင် လိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးက တနှစ်ကို ၇ ရာခိုင်နှုန်း ဒါမှမဟုတ် လည်း အဲ့ဒီထက်ပိုပြီး ဆက်တိုးချဲ့လာမယ် ဆိုရင် ရေနံသုံးစွဲမှုကလည်း တနှစ်ကို တန်ပေါင်း ၆၅၀ သန်းကျော် အထိ ရောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ စီးပွားရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုတိုးတက် မှုဆိုင်ရာ သု တေသနအင်စတီကျုဖြစ်တဲ့ စီနိုပက် (SINOPEC) အဖွဲ့က ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
IEA ရဲ့ အစီရင်ခံစာထဲမှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက ရေနံကို တစတစပိုပြီးအလေးအနက်ထား လာနေတာဟာ ဒေသ တွင်းက အခြားနိုင်ငံတွေကို ရေနံတင်သင်္ဘောကြီးတွေ ဖြတ်သန်းမယ့် “ဗျူဟာမြောက် လမ်း ကြောင်းတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို အာရုံစိုက်ဖို့” ဖိ အား ပေးရာရောက်လိမ့်မယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ အထူးစိုးရိမ်နေတာက မလေးရှားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့ မာလက်ကာရေ လက်ကြားရဲ့ နေရာကျဉ်းကျဉ်း က လေးကိုပါ။ အရှေ့အာရှကို သွားနိုင်ဖို့အတွက် တရုတ်သင်္ဘောတွေ အားလုံး အဲ့ဒီနေရာကျဉ်းကျဉ်း လေးကတဆင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံကို ဖြတ်ပြီး သွားရတာတကိုး။ နိုင်ငံရေးအရ ပြဿနာတစုံတရာတက်လာတဲ့ အခါမျိုးမှာ ရေလက်ကြားကို အလွယ်တကူ ပိတ်ဆို့လိုက်နိုင် တယ်လို့ တရုတ်တွေက စိုးရိမ်နေတာပါ။
တရုတ်အစိုးရက မြန်မာပြည်အပေါ် ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ မှီခိုလာနေတာဟာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေ အတွက် လည်း စိုရိမ်စရာဖြစ် လာစေ ပါတယ်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေက ဒေသဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားကို ပျက်စေတယ်လို့ အဲ့ဒီ နိုင်ငံတွေ ကြားမှာ သဘော ထား ကြ တာမို့ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်အပေါ် ဒေါသထွက်နေကြတာလည်း ရှိပါတယ်။
CNPC ရဲ့ ပါတနာတွေဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (Myanmar Oil & Gas Enterprise – MOGE) နဲ့ စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာ နတွေရဲ့ အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ရေနံပိုက်လိုင်းကနေ ဖြတ်သန်းသယ်ယူပို့ ဆောင်ကြေးအဖြစ် တနှစ်ကို အများဆုံး ဒေါ် လာ ၃၆.၈ သန်း ရလိမ့်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ လမ်းကြောင်းခက ဒေါ်လာ ၁၃.၈ သန်းနဲ့ ပိုက်လိုင်းကိုဖြစ်မယ့် ရေနံစိမ်းတွေအတွက် တ တန်ကို တဒေါ်လာ ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လူ့အခွင့် အရေးအဖွဲ့တွေကတော့ ဒီနှုန်းထားက သိပ်ကို နည်းလွန်းတယ်လို့ ဝေဖန်ကြပါတယ်။
ဒါ့ပြင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လိုင်းနဲ့ အတူယှဉ်ဖောက်မယ့် ရေနံပိုက်လိုင်းတလျှောက်မှာ ဒေသခံတွေကို အဓမ္မနေရာရွှေ့ပြောင်းတာတွေနဲ့ မြေ သိမ်း တဲ့ကိစ္စတွေ အမြောက်အမြား ဖြစ်နေကြတယ်လို့ လည်း အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ (NGOs) က စွပ်စွဲကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် “ဒေသခံတွေရဲ့ ပညာရေးနဲ့ ကျန်မာရေးအဆင့်အတန်းတွေ တိုးတက်လာအောင် ကူညီဖို့” CNPC က ဒေါ်လာ ၆ သန်းလှူခဲ့ တယ်လို့ အခိုင်အမာပြောဆိုကြောင်း ဂလိုဘယ်တိုင်းမ်စ်က ရေးသားတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ “ပိုက်လိုင်း တလျှောက်မှာရှိတဲ့ ရွာတွေဖွံ့ဖြိုးလာ စေရေးမှာ ပိုပြီး ကူညီနိုင်အောင်” CNPC က နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၂ သန်း ထည့်ဝင်သွား ဖို့ သဘောတူတယ်လို့လည်း အဲ့ဒီသတင်းမှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
သဘောတူလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ စာချုပ်တွေအရ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာမှာ ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ အဆင်ပြေ အောင် မကြိုးစားကြပါဘူး။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေနေ စာချုပ်နဲ့လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တာမို့ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကို ဖျက်လိုက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံက လျော်ကြေးငွေ အမြောက် အ မြားပေးရနိုင်တယ်လို့ မုံရွာကြေးနီစီမံကိန်း တိုးချဲ့တဲ့အပေါ် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် နေကြသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦး အောင် မင်းက ဖွင့်ဟပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကို တရုတ်နိုင်ငံက ဝမ်ဘောင် (Wanbao) ကုမ္ပဏီနဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်တွေက ပူးတွဲပိုင်ဆိုင် ကြတာပါ။
ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်တွေ ရှိနိုင်တာမို့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ စိတ်မကောင်းဖြစ် အောင် လုပ်မိမှာကို စိုး ရိမ်တယ်လို့ ဦးအောင်မင်းက ဆန္ဒပြသူတွေကို ပြောပါတယ်။ ဒီလို ပြောတာဟာ အထူးသဖြင့် မြစ်ဆုံရေကာတာနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီရေ ကာတာတည်ဆောက်မှုကို သဘာဝ ပါတ်ဝန်ကျင်ဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က တရားဝင် ရပ်ဆိုင်းခဲ့တာ ကိုး။
ကောလင်း ရေးနိုးစ်ကတော့ “CNPC နဲ့ ရေနံတင်ပို့မှုနည်းနာတွေကို ကိုင်တွယ်ဖို့ဆိုရင် မြန်မာပြည် မှာ အခုရှိနေတဲ့ အစိုးရထက် ပိုပြီး အား ကောင်း မောင်းသန်ရှိတဲ့ အစိုးရတရပ် လိုပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
ပျူစာတမ်းဖတ်ပွဲအပေါ် မွန်လူထုအားရှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနားတစ်ရပ်ကို မွန် ပြည်နယ် မော်လ မြိုင်မြို့ရှိ အမှတ်(၁) အရှေ့တပ်မြေလမ်း၊ ဖက်တန်းရပ် မွန် ဓမ္မာရုံ၌ ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
အခမ်းအနား ဦးဆောင်ကျင်းပသူ မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီ ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် နိုင်စိုးမြင့်က “မနက် ဖြန်စာ တမ်းဖတ်ပွဲမှာ ဘာအကြောင်း တွေဖတ် သွားမလဲ အရင်နား ထောင်လိုက်ဦးမယ် တကယ်လို့ မွန်တွေကိုထိခိုက်ခဲ့ရင် အစည်း ၇ ရက်အတွင်း အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ခေါ်ရမယ်ပြောတယ်၊ နောက်မွန်ဒေ သလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီ ဥက္ကဌ နိုင်ငွေသိန်းကလည်း မွန်သ မိုင်းအ ကြောင်း တွေ ဖော်ထုတ်ပြီး ဘယ် လိုထိန်းသိမ်းသွားမရလဲဒါတွေ ရှင်းပြခဲ့တယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါရှင်းလင်းပွဲကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၁၂ ခွဲမှ ၃ နာရီခွဲအထိကျင်းပခဲ့ပြီး မွန်သံ ဃာတော်များ၊ မွန်စာပေပညာရှင်များ၊ သမိုင်းသုတေသီများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ များ၊ စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် မြို့နယ်အသီးသီးမှ မွန်လူမှုအသင်းများ စုစုပေါင်း ၁၀ဝ၀ ကျော် တက်ရောက် ခဲ့သည်ဟု သိရ သည်။
အခမ်းအနား သဘာပတိအဖြစ် ကျိုက္မရောမြို့နယ်မှ ကော့ပလိုင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ဦးကေတုမာလာက မွန်သမိုင်း၊ လူမျိုးနှင့် ယဉ်ကျေး မှုအ မွေအနှစ်များကို မပျောက်မပျက်အောင် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် မိန့်ကြားခဲ့ပြီး မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမို ကရေစီပါတီ ဥက္ကဌ နိုင်ငွေ သိန်း၊ မွန် ဒီမိုကရေစီပါတီ ဒုဥက္ကဌ(၂) နိုင်တင်အောင်၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟိုအလုပ် အမှု ဆောင် ကော်မတီဝင် နိုင်တလညီ၊ တက္က သိုလ်ကျောင်းသား များမှ မွန်လူငယ် ကိုယ်စား မင်းထွန်းမြင့်တို့က တက်ရောက်သူများအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင် သုဝဏ္ဏဘူမိသမိုင်း စာတမ်းဖတ်ကြားတင်ပြရန် မွန်သမိုင်းသူတေသနအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး နိုင်ခင်မောင်လေးအား ဖိတ်ကြား ထား သော်လည်း တက်ရောက်ခြင်းမရှိကြောင်း နိုင်စိုးမြင့်က ပြောသည်။
အခမ်းအနားတွင် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး-ဒို့အရေး၊ မွန်တစ်မျိုးသားလုံး သွေးစည်းညီညွတ်ရေး-ဒို့အရေး၊ သမိုင်းအမှန်ကို အ ရောင်ဆိုးသူ အလိုမရှိဟု ကြွေးကြော်သံ ၃ ချက်ဖြင့် အခမ်းအနားရုတ်သိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“မနက်ဖြန်ပြုလုပ်မယ့် စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာ ဒီပျူစာတမ်း ဖတ်မယ်လို့သိရတယ်၊ အဲတော့ တကယ်လို့ မွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖတ်ခဲ့ရင် ကျ နော်တို့ အနေနဲ့ တစ်နည်းနည်းလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ် ချက်ချထားတာရှိတယ်” ဟု မွန်အ မျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီမှ အထွေအထွေအတွင်းရေး မှူး(၁) ဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်းက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း မွန်ပြည်နယ်လူထုတွေ့ဆုံပွဲ၌ ပျူနိုင်ငံနှင့် ပျူစာတမ်းဖတ် ပွဲ အခမ်းအနားကို ပိတ်ပင်ပေမည်ဟု ကတိပြုပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့မူးယစ် တာကာ ၄ သိန်းကျော်တန်ဖိုး ဘင်္ဂလာတွင် ထပ်မံဖမ်းဆီးမိပြန်ပြီ
မြန်မာနိုင်ငံထုတ် အရက်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး အမျိုးမျိုး တာကာ ၄ သိန်းကျော် တန်ဖိုးအား ဘင်္ဂလာအာဏာပိုင်များက ကောစ်ဘဇားခရိုင် အတွင်း ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သက်ဆိုင်ရာမှ ဖမ်းဆီးရမိသည့် ယင်းတန်ဖိုးမှာ အဆိုပါ မှောင်ခိုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် လှေတစီးဖြစ်ကြောင်း တာခ်နာမြို့နယ် အခြေစိုက် နယ်စပ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့မှ အရာရှိ နုရုလ် အာမိက ပြောကြောင်း ကော့စ်ဘဇားမြို့ထုတ် ယမန်နေ့က သတင်းများက ဆိုသည်။
အဆိုပါ မူးယစ်ဆေးဝါးများအား ၂၆နှင့် ၂၇ ရက်နေ့များက ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာလုပ် Golden Dry Gin နှင့် Beer တို့ အများအား ဖြင့် ပါဝင်ကြောင်း ဖေါ်ပြသည်။
သို့သော်လည်း ဖမ်းဆီးရမိသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ မူးယစ်ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားသူများအား ဖမ်းဆီးရမိခြင်း ရှိမရှိကို တစုံတရာ ဖေါ်ပြခြင်းမရှိချေ။
ကော့စ်ဘဇားခရိုင်အတွင်း မြန်မာ့မူးယစ်ဆေးဝါးများကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမှာ အများအားဖြင့် ဘင်္ဂလီများသာဖြစ်ကြောင်း သတင်းများက ဖေါ်ပြလေ့ရှိသည်။
လက်ပန်းတောင်း သပိတ်စခန်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရ၍ ဆန္ဒပြသူ ၆၀ကျော် ဆေးကုသ မှုခံယူနေရ
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာခရိုင်၊ လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေးအ တွက် ဖွင့်လှစ်ထားသည့်သပိတ် စခန်းများ ကို လုံခြုံရေးရဲများ၏ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရ မှုကြောင့် ရဟန်းသံ ဃာတော် များအပါအ၀င် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ သူပေါင်း ၆၀ကျော် ဆေးကုသမှုခံယူနေ ရကြောင်း သိရသည်။
ယမန်နေ့ သန်းခေါင်ယံအချိန်မှစတင်၍ ရဲများက မီးလောင်ဗုံး၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးများကို အသုံးပြုကာ သပိတ်စခန်းအတွင်းသို့ ပစ်သွင်းစီးနင်း ခဲ့သောကြောင့် အဆိုပါ သူများဒဏ်ရာရရှိခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိ မန္တလေးဆေးရုံနှင့် မုံရွာဆေးရုံတို့တွင် ဆေးကုသခံယူနေရသည်ဟု ရန် ကုန်ပြည်သူ့အကျိုးတော် ဆောင် ကွန်ယက်မှ ကိုဝေမှူးသွင်က ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “အခုဖြစ်သွားတဲ့တာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့် အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူး။ နောက် ပညာရှင်တွေရဲ့ တွေ့ရှိ ချက်အရ အဲဒီဗုံးတွေက ဓါတုဗေဒလက်နက်တွေမှာသုံးတဲ့ အဆိပ်သင့်စေနိုင်တဲ့ ဓါတ်ငွေ့တွေ ပါတယ် ဆိုတာကတော့ သေချာပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ယခု ယင်းဒဏ်ရာရရှိသူ ၆၀ကျော်အနက် သံဃာ့ခေါင်းဆောင် ဦးတိက္ခ၊ ဦးဝိသုတ၊ဦးဥာဏ သာမိ၊ ဥူးစိတ္တ၊ ဥူးခိန္ဒ၊ဦးသြဘာသ၊ ဦးဥာဏသီလစသည့် သံဃာပေါင်း ၄၀ ခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြဟုလည်း ကိုဝေမှူးသွင်က ဆက်ပြောသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယနေ့ညနေ ၄နာ ရီခန့်က မုံရွာမြို့သို့ သွားရောက်ပြီး ဆေးရုံတွင် ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေသူများကို ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တဆက်တည်းမှာပင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့က ဆန္ဒပြနေသူများကို နိုဝင်ဘာလ ၂၇ရက်နေ့ ည(၁၂)နာရီ နောက်ဆုံးအချိန်ထားပြီး ဖယ်ရှားပေးရန် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သော်လည်း လိုက်နာမှုမရှိဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က နိုင်ငံတကာအသုံးပြုသည့် မီးသတ်ပိုက်များ၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးများ၊ မီးခိုးဗုံးများကို အသုံးပြု၍ အဓိကရုဏ်နှိမ်နှင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းသည် ယခင်အစိုးရလက်ထက်မှစ၍ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်စေရေးအတွက် သဘာဝသယံဇာတ ထုတ်ယူမှုနည်းလမ်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုအနည်း ဆုံးဖြင့် နိုင်ငံတကာပြဌာန်းချမ်းများ နည်းပညာများအသုံးပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခု ဥပဒေ နှင့်မညီစွာ လူစုလူဝေးနှင့် ဆူပူဆန္ဒပြလာခဲ့ကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ယနေ့နေ့လည် အချိန်မှစတင်ပြီး ကြေးနီတောင်စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းရေးတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေ သူများဖြစ် သည့် ကိုဟန်ဝင်းအောင်၊ ကိုမိုးသွေး၊ ကိုသီဟ၀င်းတင်၊ ကိုအောင်နိုင်ဦးတို့နှင့် ဗကသအဖွဲ့ ၀င် သီဟစန်းဝင်း၊ ကျော်ကိုကို၊ နန္ဒာစစ်အောင်တို့ကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရမှ လိုက်ဖမ်းဆီးနေသည်ဟု ကိုဝေမှူးသွင်က ဆိုသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၇ရက်နေ့ကလည်း ရန်ကုန်မြို့တွင် လက်ပန်တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်း ရေးဆန္ဒပြခဲ့သည့် နော်အုန်းလှ၊ ကို ရဲလင်း၊ဝေဠု၊ ကိုမျိုးချစ်၊ ကိုညီညီ၊ ဒေါ်ရှမ်းမတို့ကို ရဲပုဒ်မ (၁၈)ဟု လိမ်လည်ပြီး တရားရုံးအရောက်တွင် အာမခံ၍မရသည့် ပုဒ်မ (၅၀၅/ခ)ဖြင့် အင်းစိန်ထောင်တွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ထားကြောင်းသိရသည်။
လက်ရှိ အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူများသည် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၌ ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေး အတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရထံ ခွင့်ပြုချက် မတောင်းခံခဲ့သူ များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ ၃ရက်နေ့တွင် ရုံး တင်စစ်ဆေးမည်ဟု သိရသည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း” ဆိုတဲ့ အစည်းအဝေးတရပ်ကို သျှမ်းလူမှုအဖွဲ့အစည်း တွေက ဦးဆောင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီ ခန်းမမှာ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်ကနေ ၂၈ ရက် အထိ ၃ ရက်ကြာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီ ၃ ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ သျှမ်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်း ၄ ဖွဲ့ ကိုယ်စား လှယ်များ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအခြေစိုက် သျှမ်းလူမှု အခြေပြု အဖွဲ့ အစည်း ၁၁ ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြို့နယ်ပေါင်း ၄၂ မြို့နယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အထူး ဖိတ်ကြားထားသည့် ပညာရှင် ၁၇ ဦး စုစုပေါင်း ၁၇၀ ဦး တက်ရောက်တဲ့ ဒီအစည်းအဝေးမှာ ဘာတွေအထူးပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသလဲဆိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် နန်းဝိုးဆိုင် ကို သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာနက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထား ပါတယ်။
မေး။ ။ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်ကနေ ၂၈ ရက်နေ့ထိ ၃ ရက်ကြာ ကျင်းပသွားတဲ့ အစည်းအဝေးက ဘာအစည်းအဝေးလဲ။ ဘာကြောင့် ပြုလုပ်ရပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်တဲ့ အစည်းအဝေးပါ။ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ဘာကြောင့် မငြိမ်းချမ်းသေးသလဲ။ ကျမတို့ သျှမ်းတိုင်းရင်းသားဒေသမှာလည်း မအေးချမ်းသေးဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ပြန်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ရင် လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဆူပူမှုတွေ ဖြစ်လာတယ်။ နှစ် ၆၀ ကျော်ပြီ မငြိမ်းချမ်း သေးဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးတာလည်း မအောင်မြင်ဘူး။ ဘာကြောင့်မအောင်မြင်သလဲဆိုရင် တယောက်နဲ့တယောက်၊ လူမျိုးတမျိုးနဲ့တမျိုး၊ အဖွဲ့တဖွဲ့ နဲ့တဖွဲ့ ယုံကြည်မှု မရှိကြသေးလို့ဘဲ။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရမယ်။ ယုံကြည်မှု မရှိရင် ဘယ်လိုဘဲ ဆွေးနွေးဆွေးနွေး မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်း စာချုပ်မှာ အပစ်ရပ်ဖို့ လက်မှတ်ထိုးပြီးပြီ။ ဒါပေမဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတုန်း။ ယုံကြည်မှု မရှိလို့။ ယုံကြည်အောင်လည်း လုပ်ဆောင်တာ မရှိသေးလို့။ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေရယူဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးဖို့ ပြုလုပ်ရတာပါ။
မေး။ ။ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုဆွေးနွေးပါသလဲ။ ကျေနပ်အားရမှု ရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ စစ်တပ်၊ ပါတီ၊ လူမှုအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ စာပေ/ယဉ် အဖွဲ့၊ ပြည်သူ စတဲ့ အဖွဲ့ပေါင်းစုံ က လာကြတယ်။ အားလုံးကိုရောပြီး အုပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးကြတယ်။ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဖို့ အတွက် အဖက်ဖက်က ပါဝင်ရမယ်။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စသဖြင့် ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်တာကို ဆွေးနွေးတယ်။ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ အသိပညာရှင် အတတ်ပညာ ရှင်တွေလည်း သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြတယ်။ အဖြစ်မှန် အမြင်မှန် ကိုသိပြီး ယုံကြည်မှုရအောင် ဘယ်လို လုပ်သင့်သလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးကြတယ်။ ယုံကြည်မှုရှိရင် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ဖို့ လွယ်သွားမယ်။
မေး။ ။ အစည်းအဝေးမှာ အဆင်မပြေတာတွေ နားလည်မှု မရတာတွေ ရှိလား။
ဖြေ။ ။ မရှိပါဘူး။ သျှမ်းပြည်က သျှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေ သာမက ကချင်ပြည်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းက သျှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေ၊ ပြည်ပက သျှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေလည်း လာတက်ကြတယ်။ ဆွေးနွေးရတာ အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်။ အတွေ့အကြုံတွေက ခပ်များများ ဆင်တူနေကြတော့ ပြောရဆိုရတာ နားလည်မှုရှိကြတယ်။ နားလည်လွယ်တယ်။
မေး။ ။ အာဏာပိုင်တွေ နှောင့်ယှက်တာတွေ ရှိလား။
ဖြေ။ ။ မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းလည်း လာတက်ပြီး ဒီလိုအစည်းအဝေးမျိုး ရှိသင့်တာကြာပြီ။ နောက်နောင်လည်း ဒီလိုအစည်းအဝေးရှိမယ်ဆိုရင် ကူညီပေးမယ် လို့ ပြောသွားတယ်။
မေး။ ။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်နှောင်ပိုင်းမှာ ဒီလိုအစည်းအဝေးဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ သျှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေ တွေ့ဆုံတဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်လို့လည်း မမှားဘူး။ ဒါကြောင့် အမျိုးသားရေး အတွက် ဘာတွေများ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်မလဲဆိုတာ နည်းလမ်းရှာဖွေတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်တာကြောင့် ဘာမှမဆုံးဖြတ်ပါဘူး။ အချက်အလက်တွေ ယူလာပြီး ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးတာပါ။ အဖက်ဖက်က လာရောက်ဆွေးနွေးပြီး ဒီလိုလုပ်သင့်တယ်၊ ဒီလိုပြုပြင်သင့် တယ်ဆိုပြီး အကြံပေးတာကို နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့၊ တိုးတက်ဖို့ ယူသုံးနိုင်အောင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ နောက်နောင်မှာလည်း ဒီလိုအစည်းအဝေး လုပ်ပါအုံးမယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်တာကြောင့် ဆွေးနွေး ရမဲ့ခေါင်းစဉ်တွေလည်း များတယ်။ အချိန်လည်း သိပ်မရတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ အဆင့်ထိတော့ မရောက်ဘူး။ နောက်နောင်ဆိုရင် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိ ရောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မေး။ ။ သျှမ်းတပ်ဖွဲ့ဆိုလည်း ၂ဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ရှိတယ်၊ သျှမ်းပါတီဆိုရင်လည်း ၂ ဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ရှိတယ်။ ပြည်သူ တွေက သူတို့ကို ပေါင်းစည်းစေချင်ကြတယ်။ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာများ ပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒါလည်းဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ အစည်းအဝေးမတိုင်ခင် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့လည်း သျှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေ နေထိုင်တဲ့ဒေသကို သွားရောက်ပြီး ဆန္ဒကောက်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်က လက်နက်ကိုင်တပ်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံရေးပါတီဘဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကို ပေါင်းစည်း စေချင်ကြတယ်။ မပေါင်းစည်းနိုင်ရင်လည်း ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြဖို့၊ နေရာ၊ တာဝန်ခွဲဝေကြဖို့ ပြောကြတယ်။ ဒါကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပါ။
မေး။ ။ ဒီအစည်းအဝေးကနေ သျှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ စကားကို ပြည်သူတွေ သိရှိအောင် ဘာများမှာကြားချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒီအစည်းအဝေးမှာ ဒေသအသီးသီးက လူငယ်အဖွဲ့လည်း ပါဝင်တယ်။ ကိုယ်စားလှယ် အသီးသီးလည်း လာတက်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့လည်း အချက်အလက်တွေကို ပြန်ပြောကြမှာပါ။ ပြည်သူတွေလည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ချစ်ကြဖို့၊ စိတ်ရှည်ရှည်ထားကြဖို့၊ မာနတွေ လျှော့ကြဖို့၊ တကိုယ်ကောင်းမဆန်ဘဲ အများအကျိုးအတွက် သယ်ပိုးဖို့၊ ပြည်ပမှာ ရောက်နေတဲ့ လူငယ်တွေလည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ပြန်လာပြီး တိုင်းပြည်အကျိုးသယ်ပိုးကြဖို့ အစည်းအဝေး တက်ရောက် ကြသူတွေအားလုံးက တောင်းဆိုကြပါတယ်။
၃ ရက်တာကာလ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်၊ လက်ရှိ သျှမ်းနိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ စာပေ ယဉ်ကျေးမှု၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာများ၊ သျှမ်းလူမျိုးများနေထိုင်ရာဒေသများတွင် ရာစုနှစ်တဝက်ကြာ ခံစားနေရသော နိုင်ငံရေးပြဿနာများ ပကတိအခြေအနေများကို စာတမ်း ၂၃ စောင်ဖြင့် တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ စာတမ်း ၂၃ စောင်အပေါ် အခြေခံပြီးတော့ အစည်းအဝေးတက်ရောက်တဲ့လူတွေက ခေါင်းစဉ်အလိုက်အုပ်စုခွဲပြီး သဘောထားပေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲမှာပြီးဆုံးတဲ့ရက်မှာဘဲ လူထုထံက ကောက်ယူထားတဲ့ ဆန္ဒသဘောထားစစ်တမ်းတွေရဲ့ အဖြေကို စုစည်းပြီး တင်ပြဆွေးနွေး ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကျဆုံး ရခိုင် သူရဲကောင်း ၆၁ ဦးအား ရည်စုး၍ ဆံတော်ရှင် စေတီတော်တွင် ဆု တောင်းပွဲပြုလုပ်
ဇွန်လနှင့် အောက်တိုဘာလ ပဋိပက္ခအတွင်း ကျဆုံးသွားခဲ့သူ ရခိုင်အမျိုးသား ၆၁ ဦးကို ရည်စူးပြီး ဆုတောင်း အမျှပေးဝေပွဲ အခမ်းအနား တစ်ခုကို ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့နယ်ရှိ ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင် ဆံတော်ရှင် စေတီတော်တွင် ယမန်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ကြ သည်။
ကျဆုံးခဲ့ကြရသော ရခိုင် အမျိုးသား ၆၁ ဦးကို ရခိုင်အာဇာနည် သူရဲကောင်းများ အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ရည်စူး ကုသိုလ် ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ် သည်ဟု ကိုယ်တိုင် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သူ ရတပ ပါတီ ပေါက်တော မြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးတက် ထွန်းအောင်က နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
“အဓိကတော့ အရေးခင်းအတွင်းမှာ ဘင်္ဂလီ ကျူးကျော်စစ်ကို ကာကွယ်ရင်း ကျဆုံးသွား တဲ့ ရ ခိုင်အာဇာနည် သူရဲ ခေါင်း ၆၁ ဦးကို ရည် စူးပြီး ဆီမီး ပူဇော်၊ ရေစက်ချ၊ အမျှဝေ၊ မေတ္တာပို့သမူ ပြုလုပ် ကြတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
အခမ်းအနားသို့ ရောက်ရှိလာသူများအား လူငယ်ခေါင်းဆောင်များ၊ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ရဟန်း သံဃာတော်များက နောင်တွင်ဖြစ်လာ မည့်အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်စောင့် ရှောက်နိုင်ရန် အသိပညာပေးမှု မိန့်ခွန်း များဟောပြောခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
“ရခိုင်ဒေသဟာ ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘယ်အချိန်မဆို ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ တိုက် ခိုက်မှုကိုအချိန်မရွေး ခံရနိုင်တယ်။ ဒါ ကြောင့် မိမိတို့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ အနေနဲ့ အမြဲသတိနဲ့ သွားလာနေထိုင်ကြဖို့၊ အမြဲ သတိနဲ့ သွားသ တိ လာသတိရှိရှိနဲ့ နေထိုင်ကြဖို့ကို ပြော သွား ကြပါတယ်” ဟု ဦးတက်ထွန်းအောင်က ဆိုသည်။
၂၀၁၂-ခုနှစ် ဇွန်လတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပထမအကြိမ် ဆူပူမှုအတွင်း ရခိုင်လူမျိုး (၃၂)ဦး ကျဆုံးခဲ့ရပြီး၊ ပြီးခဲ့သော အောက်တိုဘာလအ တွင်း က တစ်ကျော့ပြန် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုတွင် ရခိုင် လူမျိုး စုစု ပေါင်း(၂၉)ဦး ကျဆုံးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မထင်မှတ်ဘဲ ရွာချလိုက်တဲ့ ဆောင်းတွင်းမိုး ဖွဲဖွဲစိပ်စိပ်ကြားမှာ အပြာရောင် မိုးကာမိုး၊ ၀ါးထရံဖြစ်သလို ကာရံထားတဲ့ တဲကုပ်ကုပ်လေး တွေ ငြိမ်သက်နေတယ်။ ညနေစောင်းလာလေ အအေးဓာတ်က ပိုလာလေဆိုတဲ့ ဒေသမှာ မိုးကလည်း ရွာ၊ အအေးဒဏ်က ကာကွယ်စ ရာ မီးဖို ကလွဲလို့ ဘာမှ မရှိပါဘူး။
နေရာက တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်အနီး၊ တရုတ်နိုင်ငံဘက်အခြမ်း ယူနန်ပြည်နယ်ထဲက ယင်ဂျန်းဆိုတဲ့ မြို့ကနေ ၆ နာရီလောက် ကားစီးရ တဲ့ တောင်ပေါ်ဒေသ တနေရာမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်း ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့နေရာ ဖြစ်ပါ တယ်။ မ ဂါးယန်လို့ ခေါ်တဲ့ အဲဒီနေရာမှာ ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ဘေးဒုက္ခကြောင့် ထွက်ပြေးလာတဲ့ ကချင်ဒုက္ခသည် ၂၀၀၀ ကျော် နေ ထိုင် ခိုလှုံလျှက် ရှိပါတယ်။ ပင်လယ်ရေပြင်အထက် အမြင့်ပေ ၅ ထောင်ကျော်မှာ တည်ရှိပြီးတော့ မဂါးယန်ကို သွားဖို့ လမ်းရယ်လို့ မည် မည်ရရ မရှိဘဲ တရုတ်နိုင်ငံက သစ်ထုတ်လုပ်ဖို့ ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ သစ်ထုတ်လမ်းကို အသုံးပြုနေရပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေအများစုက လည်း သစ်ထုတ်လုပ် ရေး လမ်းရဲ့ လမ်းဘေးတဘက်တချက် တောင်စောင်းတွေမှာ ဖြစ်သလို တဲထိုးနေထိုင်နေရပါတယ်။
“လမ်းပန်း ခက်ခဲတော့ အကူအညီပစ္စည်းက မရောက်လာတာ များတယ်။ အဓိက စားရေးအတွက်ပဲ အလျဉ်မီအောင် လုပ်နေရတယ်။ ကျန် တာကတော့ ဖြစ်သလိုပဲ ဖြေရှင်းလိုက်တာ များပါတယ်” လို မဂါးယန် ဒုက္ခသည်စခန်း က စခန်းတာဝန်ခံတဦး ကပြောပါတယ်။
မဂါးယန်ကို ရောက်ဖို့ တရုတ်နိုင်ငံ ယင်ဂျန်းကနေ ခါ့ရှန်ဆိုတဲ့မြို့ကို ကားနဲ့သွားနိုင်ပြီးတော့ ခါ့ရှန်ကနေ ဆိုင်ကယ်တက္ကစီနဲ့ ခရီးဆက်မှ ရမှာ ပါ။ လမ်းခရီးက ကားလမ်းမဟုတ်တဲ့ သစ်ထုတ်လမ်းဖြစ်တဲ့အပြင် တောင်တက်လမ်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးရွာနေရင် ကားလမ်းချော် မှာမြေ ပြိုမှာကိုလည်း စိုးရိမ်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျမတို့ဆီလာဖို့ ခက်တဲ့အတွက် တော်ရုံအဖွဲ့အစည်း မလာပါဘူး။ အဓိက ဆန်နဲ့ ဆေးဝါးကို KBC (ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အဖွဲ့ချုပ်) နဲ့ KIO က ပေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ထက်က ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေ ရှိနေတယ်။ ကျမတို့ ဆန်နဲ့ ဆေးဝါး ရတယ်။ တချို့ နေရာတွေ မှာ ဆန်နဲ့ဆေးဝါးမပြောနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးမယ့် ဆရာမတောင် မရှိပါဘူး” လို့ မဂါးယန်ဒုက္ခသည်စခန်းက တာဝန်ကျ ဆရ?မ မသိန်းဝမ် က ပြောပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လကတည်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မြန်မာအစိုးရ တပ်မတော်နဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ကြောင့် ကချင်ပြည်သူ ၁ သိန်းနီးပါး နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရသူများအဖြစ် ဒုက္ခသည်စခန်းများမှာ ခိုလှုံနေကြရပါတယ်။ ဒုက္ခသည် ၁ သိန်းနီးပါးလို့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ အထဲက ၆ သောင်းကျော်ဟာ KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နယ်မြေများအတွင်းမှာ နေထိုင်နေကြရပြီးတော့ ၃ သောင်းကျော်က တော့ အစိုးရ ထိန်းချုပ်နယ်မြေများမှာ တည်ရှိနေပါတယ်။
တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်တဲ့ ဒေသတွေက နီးစပ်ရာ လုံခြုံမယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ဒေသတွေကို အသက်လုပြေးရတဲ့အတွက် စစ်ပြေးသူအများစုဟာ ပစ္စည်း များများစားစား မသယ်နိုင်သလို နေရာရွေးခြယ်ခွင့်လည်း မရှိကြပါဘူး။ KIA ထိန်းချုပ် နယ်မြေဘက် ရောက်သွားတဲ့ ဒုက္ခသည် တွေကို KIA, တရုတ်အစိုးရနဲ့၊ တခြားသော လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတချို့က ထောက်ပံ့သလို၊ မြန်မာအစိုးရတပ် မတော်ဘက် ရောက်လာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကိုလည်း ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ NGO, INGO တွေက အကူအညီ ပေးနေ ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ၊ လုံခြုံရေးအခက်အခဲကြောင့် ကူညီထောက်ပံ့မှု လိုအပ်သလောက် မရဘဲ အ ခက်အခဲကြီးကြီးမားမား ကြုံနေရတဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေလည်း အများကြီး ရှိနေပါတယ်။
“လမ်းသာတဲ့နေရာတွေ ဥပမာ မြစ်ကြီးနား၊ ၀ိုင်းမော် လာတာများတယ်။ ကန်ပိုက်တီးမှာ ဆင်ကြိုင် ဆိုတာ တော်တော်လေး ချို့ချို့တဲ့တဲ့ နေရ တဲ့ စခန်းတခုရှိတယ်။ ကန်ပိုက်တီး တံတားက ကျိုးသွားတော့ စက်သီးနဲ့ ကူးရတယ်။ တခါ တည်း လုံလုံလောက်လောက် လာလှူကြဖို့ ဦးဇော် ဇော်တို့၊ ဦးအောင်ကိုဝင်းတို့ အဲလိုလူတွေကို မေတ္တာရပ်ခံရတယ်” လို့ ကချင်ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေ ရာချထား ရေး ၀န်ကြီး ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ စာရင်းအရ အစိုးရ ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘက်မှာ ဒုက္ခသည်စခန်း စုစုပေါင်း ၈၄ ခုရှိပြီး စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ဦးရေ ၃၁၆၂၅ ဦးအထိ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြစ်ကြီးနား၊ ၀ိုင်းမော်၊ ဗန်းမော်၊ ရွှေကူ၊ လွယ်ဂျယ်၊ မိုးကောင်း၊ မိုးညှင်း စတဲ့ ဒေသတွေက လမ်း သာတဲ့အ တွက် ပြည်တွင်းက လူမှုရေးအဖွဲ့ငယ်များရဲ့ ထောက်ပံ့မှုရော၊ ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့မှုနဲ့ တခြားအထောက်အပံ့ များကို အခက်အခဲမရှိ ရယူနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကန်ပိုက်တီး၊ ပန်ဝါ၊ မိုးမောက်၊ မံစီ စတဲ့ ဒေသတွေဟာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေး အခြေအနေ တွေ ကြောင့် အကူအညီပစ္စည်းတွေ ပို့ဖို့ ခက်နေတယ်လို့ ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ဆိုပါတယ်။
“ပန်ဝါမှာက တိုက်ပွဲက အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတော့ မသွားရဲကြဘူး။ မံစီလို နေရာမျိုး ကျတော့လည်း ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ သွားမှရမယ့် နေရာမျိုး တွေရှိတယ်။ အဲဒီအပြင် ကူညီထောက်ပံ့ဖို့က အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ ရနေတော့ ကိုယ်လက်လှမ်းမီတဲ့ နေရာတွေမှာကိုပဲ မလောက်င နိုင် တဲ့အ တွက် ပိုဝေးတဲ့နေရာကို ဆက်သွားဖို့က အခက်အခဲအများကြီး ရှိပါတယ်” လို့ KIA က တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။
KIA နဲ့ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) က ကောက်ယူထားတဲ့ စာရင်းတွေအရ KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာ ဒုက္ခသည်စခန်းစုစုပေါင်း ၂၁ ခု ထိရှိပြီး လူဦးရေက ၆၃၅၀၀ ခန့် ရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်။ KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းက ဒုက္ခသည် အများစုကတော့ KIA ဌာနချုပ် တည်ရှိရာ လိုင်ဇာ အနီးတ၀ိုက်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ နယ်စပ်တလျှောက်မှာ လို့သိရပါတယ်။ လိုင်ဇာ အနီးတ၀ိုက်က ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကို တော့ KIO က လျှပ်စစ်မီးနဲ့ ဒုက္ခသည် ကလေးများရဲ့ပညာရေးအတွက် ကျောင်းဆောက်ပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နယ်စပ်တလျှောက် မှာတော့ KIO ရဲ့ အ ကူအညီအပြင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကူအညီတချို့လည်း ရရှိနေတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
“တရုတ်က တိုက်ရိုက် ကူညီတာမျိုးတော့ မလုပ်ဘူး။ ဘာသာရေးအရ ကူညီပါတယ်။ KBC လို အဖွဲ့တွေက တဆင့်လှူတယ်။ နောက် ပြည် တွင်းက အဖွဲ့လေးတွေလည်း ဒီကို လှူတာတွေ ရှိပါတယ်။ အထောက်အပံ့များလို့ ကျနော်တို့မှာ လောက်ငှတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ လိုအပ် ချက်က အမြဲ အဆိုးဆုံးအဆင့်မှာ ရှိနေတယ်” လို့ လိုင်ဇာအနီး ဂျယ်ယန်း ဒုက္ခသည် စခန်းက တာဝန်ခံ ဦးဘရန်ရှောင်က ပြောပါတယ်။
KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းက နမ်ခမ်ဂျော်စခန်း၊ ပလောင်စခန်း၊ မဂါးယန်စခန်း စတဲ့စခန်းတွေနဲ့ ပါဟောင်၊ လူဟောင် စတဲ့ ဒေသ တွေမှာ ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေရှိနေပြီးတော့ မြန်မာတပ်မတော် အစိုးရဘက်က တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် မှတ်တိုင် ၆၊ မှတ်တိုင် ၈ ဒေသ တွေဟာ အ လွန်အေးတဲ့ ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အခြေအနေ စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်က မအားခါန်က ပြော ပါတယ်။
“ကျမတို့ဘက်က အထောက်အပံ့ မရောက်နိုင်တဲ့ နေရာတွေကို UNHCR (ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မ ဟာမင်းကြီးရုံး)၊ KBC, KNFS လိုအဖွဲ့တွေ ကတဆင့် ထောက်ပံ့နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားတာနဲ့တော့ မ တူနိုင်ဘူး။ KIA ဘက်ကိုလည်း ကျမတို့ အကူ အညီပေးချင်ပါတယ်။ သူတို့က လက်မခံတာတော့ ကျမတို့လည်း မတတ်နိုင်ဘူး” လို့ ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ဆက်ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ကချင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး (KWAT) ကလည်း ကချင်ဒုက္ခသည်များအတွက် ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတ ကာ အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ အကူအညီဟာ အခြေခံအစားအသောက် လိုအပ်ချက်ရဲ့ ၄ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရရှိနေတယ်လို့ ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာ လ ၂ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ အစီရင် ခံစာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အစီရင်ခံစာမှာ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းက စစ်ပြေးဒုက္ခ သည် ၆ သောင်းကျော်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အကူအညီရဲ့ ၃ ရာခိုင်နှုန်းကို ကုလသမဂ္ဂမှ ရရှိပြီးတော့ ၁ ရာခိုင်နှုန်းဟာ နိုင်ငံတကာ NGO တွေဆီက ရရှိတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
“ကချင်ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် သွားလှူဖို့ လုံခြုံရေးအရ အဆင်မပြေဘူး။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ခွင့်မ ပြုဘူးဆိုတာတွေက ဆင်ခြေတွေပါ။ တ ကယ်သွားနိုင် လုပ်နိုင်တဲ့ ပြည်တွင်း အဖွဲ့အစည်းတွေကတဆင့် ထောက်ပံ့ရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်” လို့ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ရက်မှ မအား ခါန်က ဆိုပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွက် ပြည်တွင်းကနေ အဖြူရောင်တွဲလက်များ၊ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ရက်၊ စိမ်းရောင်စို (မန္တလေး)၊ ပန်းရဲ့လမ်း အစရှိ တဲ့ အဖွဲ့တွေက ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အလှူငွေရှာဖွေတာ၊ ကိုယ်တိုင် သွားရောက်လှူဒါန်းတာတွေကို လုပ်နေပါတယ်။
စစ်ပွဲကာလ တနှစ်ကျော်အပြီး စစ်ဘေး ပုန်းရှောင်သူတွေ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် ပြန်ချင်ကြပေမယ့် မြန်မာအစိုးရ တပ်မတော်ရော KIA နှစ် ဘက်စ လုံးက စစ်ရေးအရ အလျှော့ပေးမယ့်ပုံ မပေါ်သေးပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ တရားဝင် တွေ့ဆုံမှုရော၊ တရားမ၀င် တွေ့ဆုံမှု ပါဆိုရင် ၁၀ ကြိမ်အထိ လုပ်ခဲ့ကြပေမယ့်တိကျသေချာတဲ့ သဘောတူညီချက်မျိုး အခုအချိန်ထိမရသေးဘဲ တဖက်နဲ့တဖက် သံသယ ကြီးထွားနေဆဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
Burma's Kaman Muslims Cite Religious Conflict in Rakhine State
( 55 )Myanmar verifying Muslim citizenship
( 54 )ငါးသိုင်းချောင်းတွင် မတ်ပဲစိုက်ကွင်း အများအပြား ပိုးကျပျက်စီး
( 53 )Suu Kyi demands apology for Myanmar mine crackdown
( 52 )လက်ပံတောင်း အကြမ်းဖက်မှုတရားခံ ၅ ရက်အတွင်း ဖော်ထုတ်ပေးရန် မန်း သံဃာများ ဆန္ဒပြ
( 51 )Suu Kyi Finally Condemns Copper Mine Raid
( 50 )ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးသာအေး၊ ဝမ်ပေါင်နှင့် ဒေသခံများကို တွေ့ဆုံ
( 49 )Myanmar verifying Muslim citizenship
( 48 )နျူပစ္စည်းတွေကိစ္စ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ် စာရေးမေးမြန်း
( 47 )Aung San Suu Kyi intervenes following clashes at copper mine
( 46 )ကြေးနီစီမံကိန်း ချောမွေ့ရန် တရုတ်သံရုံး မေတ္တာရပ်ခံ
( 45 )My leader
( 44 )မန္တလေးသံဃာတွေ ထိုင်သပိတ်စတင်မည်
( 43 )In Burma, the people hunger for change in an otherworldly nation that only the tourists find charming
( 42 )ကချင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဝက်သက်ရောဂါ အဖြစ်များနေ
( 41 )Burma army raids Kachin refugee camp, detains 20 villagers
( 40 )မန္တလေးသံဃာတွေ ထိုင်သပိတ်စတင်မည်
( 39 )Thein Sein hosts Vietnamese President
( 38 )ဆန္ဒပြမှုအပေါ် အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းမှု ကန့်ကွက်ဝေဖန်
( 37 )Suu Kyi urges talks to end mine protests
( 36 )လက်ပန်းတောင်း သပိတ်ဖြိုခွဲမှုနဲ့ မီးလောင်ဗုံး
( 35 )US Senator Writes to Thein Sein over Seized Cargo
( 34 )လက်ပန်းတောင်းတောင် အရေး ဒေါ်စု ကြားဝင်ညှိနှိုင်းမည်
( 33 )Contrasting The Political Climate In Burma And Sr
( 32 )ကြေးနီစီမံကိန်းအနီးက သပိတ်စခန်းတွေကို အင်အားသုံး ဖြိုခွဲ
( 31 )Police intervene to end Myanmar mine protest
( 30 )လက်ပန်းတောင်းတောင် အရေး အစိုးရထုတ်ပြန်ချက် နာရီပိုင်းအတွင်း ပယ်ဖျက်
( 29 )US gov't keeps urging NK to act like Myanmar
( 28 )နိုင်ငံ “သိက္ခာရှိစွာ” ဒေါ်စု ဖြေရှင်းလိုကြောင်းပြော
( 27 )Monks hurt in Burma mine protest
( 26 )မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှို့ဝှက်မြှပ်နှံထားတဲ့ Spitfire လေယာဉ်တွေကို စတင်ရှာဖွေ
( 25 )Jaguar Land Rover revving in Myanmar
( 24 )ရွှေတူးလုပ်သားတွေ ချီတက်ဆန္ဒပြမှု ရပ်ဆိုင်း
( 23 )Myanmar breaks up mine protest
( 22 )ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ယနေ့ ပယ်ဖျက်လိုက်
( 21 )Forceful crackdown on Burma protesters
( 20 )ကြေးနီတောင်စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းမှ သပိတ်စခန်းတွေ ရုပ်သိမ်းမယ်လို့ပြော
( 19 )Suu Kyi Urges Calm after Brutal Protest Raid
( 18 )ဆန္ဒပြမှုအပေါ် အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှု ကန့်ကွက်ဝေဖန်
( 17 )Myanmar cracks down on mine protest; dozens hurt
( 16 )အစိုးရက သပိတ်စခန်းများကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းသည့်အပေါ် အမြင်
( 15 )Rangoon Lights Up as Tazaungdaing Starts
( 14 )လက်ပန်းတောင်းတောင် သပိတ်စခန်း လုံထိန်းရဲတွေ စီးနင်းဖြိုခွဲ
( 13 )'No chemical weapons used', says President Office
( 12 )လက်ပန်းတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းခံရ
( 11 )Spitfire fan's 16-year Burma search for buried aircraft
( 10 )ကချင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဝက်သက်ရောဂါ အဖြစ်များနေ
(9)Tata motors' Jaguar Land rover partner keen to enter Myanmar market
( 8 )ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် အမျိုးသမီးများကို ပိုမိုပါဝင်ခွင့်ပေးရန် တောင်းဆို
(7)Travel in Myanmar still has its quirks
(6)TIME မဂ္ဂဇင်း၏ ‘၂၀၁၂ ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်’ အဆိုပြုမှု ဒေါ်စုနှင့် ဦးသိန်းစိန် ပါဝင်နေ
(5)Japanese Firms Plan Plastic Production in Burma
(4)ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်များ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းရန် လိုလား
(3)Myanmar cracks down on mine protest; dozens hurt
(2)သုခရိပ်မြုံ HIV ကလေးငယ်များအတွက် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲ ကျင်းပ
( 1 )Burmese firm secures TV rights for English football
လက်ပံတောင်းတောင် အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အဆင်ပြေစေရန် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပေးသွားမည်ဟု ထိုဒေသကို ရောက်ရှိ နေသည့် အ မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒေသခံ လူထုကို ပြောဆိုလိုက်သည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်တန့်ရေး ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြ တောင်းဆိုသူများကို အာဏာပိုင်များက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခဲ့ပြီး နောက် ရောက်ရှိလာသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စောင့်ကြိုနေသည့် ထောင်သောင်းချီသော ဒေသခံ လူထုပရိတ်သတ်အား မိန့်ခွန်းပြောကြား ရာတွင် ယင်းသို့ ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“အခုဒီဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ ကြေးနီစီမံကိန်းပြဿနာကို အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပြေလည်သွားစေချင်တယ်၊ ဒီလိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပြေလည်မှ ကျမတို့ပြည်သူတွေလည်း သက်သာမယ်၊ နိုင်ငံလည်း သိက္ခာရှိတယ်၊ ကျမတို့အနာဂတ်အတွက် လည်း ကောင်းတဲ့ ခြေလှမ်းဖြစ် တယ်၊ အဲဒါ ကို ကျမ ကြိုးစားမယ်၊ ကြိုးစားပေမယ့်လည်း ကျမ အောင်မြင်မယ် မအောင်မြင်မယ်ဆိုတာ ကိုတော့ ဘယ်လိုမှ အာမခံချက် မပေးနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ပြည်သူကသာ ကျမနဲ့ လက်တွဲပြီးတော့ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အောင်မြင် နိုင် မယ်လို့ ကျမ ယုံပါတယ်” ဟု လူ ထုပရိတ်သတ်ကို ပြောဆိုသည်။
စီမံကိန်းရပ်တံ့ရေး တောင်းဆိုခဲ့ကြသော ရဟန်းသံဃာများနှင့် ဒေသခံလူထုကို ယနေ့မနက် ၃ နာရီခန့်က အာဏာပိုင်များက အကြမ်း ဖက် ဖြိုခွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထည့်သွင်း ပြောဆိုသွားခြင်းမရှိပေ။
မိန့်ခွန်းမပြောဆိုမီ ကြေးနီစီမံကိန်းကို အဓိကလုပ်ဆောင်နေသည့် ဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီနှင့် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တစ်နာရီ ကျော် အကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သကဲ့သို့ သပိတ် စခန်း ဖြိုခွင်းခံရမှုမှ မျက်မြင်အချို့ကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ မှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ညတွင် မုံရွာမြို့တွင် နားခိုမည်ဖြစ်ပြီး မနက်ဖြန်တွင် မြို့ခံတာ ဝန်ရှိသူများ၊ သပိတ်စခန်း အကြမ်းဖက် ခံရမှုတွင်ပါဝင်သူများ၊ ဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံရန်ရှိကြောင်းနှင့် မနက်ပိုင်းတွင် မုံရွာမြို့ မြစ်ဆိပ် အောက်ဘက်တွင် မိန့်ခွန်းထပ်မံပြော ကြား မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။
မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ ဦးစီးထားသော ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီနှင့် တရုတ် ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေ သော အဆိုပါ ကြေးနီစီမံ ကိန်း ကြောင့် သဘာဝတောင်တန်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ ဒေသခံတို့၏ လယ်ယာမြေများ အဓမ္မ သိမ်းပိုက် ခံရခြင်း၊စီမံကိန်းအညစ်အကြေး များမှကျန်း မာရေးထိခိုက်စေခြင်းနှင့် အခြားဆိုးကျိုးများကို ထောက်ပြကာ ဒေသခံ ကျေးရွာ ၂၆ ရွာက ယခုနှစ် မေလမှစတင်ကာ နှစ် ဝက်ကျော် ကြာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီး ယနေ့မနက်ပိုင်းက အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
ယင်းသို့ ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ရဟန်းသံဃာ ၉၇ ပါးနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၅၀ ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး သံဃာတော် ၁၅ ပါးနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးမှာ ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်၍ အတွင်းလူနာအဖြစ် မုံရွာဆေးရုံကြီးနှင့် မန္တလေးဆေးရုံကြီးတို့တွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေလျက်ရှိပြီး ကျန်ဒဏ်ရာရရှိသူများ မှာစိုး ရိမ်စရာမရှိကြောင်း ဧရာဝတီက စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ယင်းဖြိုခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကရုဏ်းနှိမ်နှင်းရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ အသုံးပြုလျက်ရှိသော မီးသတ်ပိုက်များ၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးများနှင့် မီးခိုး ဗုံးများကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး အင်အားအလွန်အကျွန် သုံးစွဲခြင်းမရှိကြောင်း လူအုပ်စုခွဲခြင်းကြောင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိသူများကို အစိုး ရ ဆေး ရုံတွင် ကုသပေးလျက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းသို့ထုတ်ပြန်ချက်၌ “ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရခြင်းသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် နိုင်ငံတော်၏ အ ကျိုးစီးပွားနှင့် အများပြည်သူတို့၏အ ကျိုးစီးပွားအား ဥပဒေနှင့်အညီ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန် ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်နှင့် အညီဆောင် ရွက် ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ် ပြန် အပ်ပါသည်” ဟု သမ္မတရုံး အင်တာနက်စာမျက်နှာ၌ ဖော်ပြသကဲ့သို့ အစိုးရရုပ်သံ သတင်းများကလည်းကြေညာခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း အင်အားသုံး နှိမ်နင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေး နယ်ပယ်အသီးသီးရှိ ခေါင်းဆောင်များက အစိုးရကို ဝေဘန် ပြော ဆိုနေကြသည်။
ကြေးနီစီမံကိန်း ပြဿနာ အေးအေးချမ်းချမ်း ပြေလည်စေချင် – ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီးစီမံကိန်း ပြဿနာ ကို အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပြေလည်စေချင်တယ်လို့ သူရဲ့ မိန့်ခွန်း မှာ ပြောဆို ပါတယ်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာမြို့ကို နေ့လယ် ၂ နာရီလောက်မှာ ရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက် ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ညနေ ၄ နာရီကျော်လောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီ နောက် လက်ပန်းတောင်းတောင် ကံကုန်း ကျေးရွာမှာ ဒေသခံတွေကို မိန့်ခွန်း ပြောကြားရာမှာ ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။
“ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကို မရဘဲနဲ့ ကျမတို့အောင်မြင် နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ပြည် သူတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုဆိုတာ ပြည်သူအကြိုက် လွယ်လွယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ စိတ်က လေးတွေ ချပြီး တော့ ပြည်သူရဲ့ ထောက်ခံမှုကို မမှန်မ ကန်နည်းနဲ့ ရယူရင် ရေရှည်မှာ အကျိုးမရှိပါဘူး။ ကျမ ပြည်သူနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၊ မှန်မှန်ကန် ကန်၊ ရိုးရိုးဖြောင့်ဖြောင့် ဆက်ဆံမယ်။ မလှည့်ဖျားဘူး။ကျမရဲ့ဆုံးဖြတ် ချက်တွေ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြည်သူကမကြိုက်ရင်လည်း မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောနိုင်တယ်။ ကျမ တခုခု လုပ်တယ်ဆိုရင် ဘာလို့လုပ် သလဲ ကျမရှင်းပြမယ်။ အခု ဒီဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ ကြေးနီစီမံကိန်း ပြဿနာတွေကို ကျမ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပြေလည်သွားစေချင်တယ်။ အေးအေး ချမ်းချမ်းပြေလည်ရင် ကျမတို့ပြည်သူတွေလည်း သက် သာတယ်၊ နိုင်ငံလည်း သိက္ခာရှိတယ်။ ကျ မတို့ အနာဂတ်အတွက်လည်း ကောင်းတဲ့ ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်။ ဒါကို ကျမကြိုးစားမယ်၊ ကြိုးစား ပေမယ့် ကျမ အောင်မြင်တယ် မအောင်မြင် ဘူးဆိုတာကတော့ ကျမက ဘယ်လိုမှ အာ မခံချက်မပေးနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူကသာ ကျမနဲ့ လက်တွဲပြီး ပြေလည်မှုရှာမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မယ်လို့ ကျမ ယုံပါတယ်။”
“ကျမပြည်သူကို တခုပဲ တောင်းခံချင်ပါတယ်၊ သေသေချာချာ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကျမက ဘယ်လိုပဲ ဆုံး ဖြတ် ဆုံးဖြတ်. ကျမဆုံးဖြတ်ချက်မချ ရသေးဘူး။ ကျမ လုပ်ငန်းရှင်နဲ့လည်းတွေ့ပြီးပြီ၊ သက်ဆိုင်ရာ ရွာသူရွာသားတွေ၊ လုပ်ငန်းကို ကန့် ကွက်တဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့လည်း တွေ့ချင် တယ်။ တွေ့ပြီး ဟိုဘက်ဒီဘက် အမြင် ၂ ခုကို ကြည့်ပြီးတော့ ကျမတတ်နိုင်သလောက် ပြေလည် အောင် ညှိပေးချင်တယ်။ ဒီလိုညှိပေးတာ ကို ပြည်သူတွေက သဘောတူရဲ့လား။”
“ကျမတို့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တယ်ဆိုတာ ကျမ ယုံကြည်တယ်။ ကျမ တို့ဟာ အချင်းချင်းကြားမှာ စေတနာ၊ မေတ္တာနဲ့ နေချင်တယ် ဆိုတာလည်း ယုံကြည်တယ်။ လူသားတိုင်းဟာ ဒီလိုပါပဲ. စေတနာ၊ မေတ္တာ နဲ့ နေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ အင်မတန် အေးချမ်းပါတယ်။ ဒေါသတွေ ဟုန်းဟုန်းတောက်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဟာ မအေးချမ်းနိုင် ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျမတို့နိုင်ငံ အေးချမ်းဖို့ အတွက် ကျမဟာ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနည်းလမ်းကို အစဉ်အမြဲပဲ လျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလျှောက်တဲ့အခါကျမနဲ့အ တူ ပြည်သူ ပါလာမှ ကျမလုပ်ငန်းတွေဟာ အောင်မြင်နိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ကျမကို ပြည် သူတွေက လမ်းမှာ ကြိုဆိုရင် ကျမအင်မတန်မှအား တက်တယ်။ အားတက်တယ်ဆိုတာဟာ ကျမကို ကျန်းမာပါစေ အော်နေလို့ မဟုတ် ဘူး။ အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေအော်နေလို့မဟုတ် ဘူး။ ပြည်သူရဲ့ ထောက်ခံမှု ရှိရင် ကျမတို့ လုပ်ငန်းတွေ အောင်ချေအများကြီးရှိတယ်လို့ အားတက်ရပါတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းဆို တာဟာလွယ် ကူတဲ့အချိန် မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘက်က ခက်ခဲတဲ့ အချိန်မှာ ရပ်တည် ပေးသူများဟာ မိတ်ဆွေကောင်းပဲ။ ကျမတို့ရဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ကျမရဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းတွေဖြစ်စေချင်တယ်လို့ ကျမ ရိုးရိုးပဲပြောပါရ စေ။”
“ကျမအနေနဲ့လည်း ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ချင်တယ်။ ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာ မိတ်ဆွေ ကောင်းအဖြစ် ရပ်တည်မယ်။ နောက် တခုက မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ မှန်မှန်ကန်ကန် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံရတယ်၊ တောင်းဆိုရ တယ်။ ကိုယ့်အကြိုက် လိုက်လိုက်ပြော တဲ့ လူက မိတ်ဆွေကောင်းလို့ မထင်နဲ့နော်။ ဘယ်တော့မဆို ကိုယ့်အကြိုက်ကိုယ် လိုက်ပြီးပြော တာဟာ မိတ်ဆွေကောင်းများရဲ့ အလုပ်မဟုတ် ဘူး။ တကယ့်မိတ်ဆွေများဆိုတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးကို ရှေးရှုပြီးတော့ ပြောသင့် ပြောထိုက်တာကို ပြောမယ်၊ ထောက်ပြသင့်တာကို ထောက်ပြမယ်။ ကျမတို့ဟာ တဦးနဲ့တဦး ကျမတို့နဲ့ပြည်သူကြားမှာ တကယ့်ကို ကောင်းမြတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ဆက်ဆံမှုမျိုး ဖြစ်စေချင် တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျမတတ်နိုင်သလောက် ပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့တယ်။ ပြော ဆိုတယ်ဆိုတာဟာ ပြည်သူတွေနဲ့ ကျမတို့ရဲ့ ကြားမှာနားလည် မှုတွေ တည်ဆောက်နိုင်အောင်လို့၊ ကျမတို့ကြားမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ သံ ယောဇဉ်တွေ တည်ဆောက်နိုင်အောင်လို့ ကျမ တွေ့ဆုံတာပါ။ တကယ် တော့ တယောက်ချင်း၊ တယောက်ချင်း တွေ့နိုင်ရင် ပိုကောင်း တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သန်း ၆၀ ကို ဘယ်လိုလုပ် တွေ့နိုင်မှာလဲ။ သန်း ၆၀ ကို တ ယောက်ချင်းစီ မတွေ့နိုင်တော့ ဒီလိုပဲ တွေ့ရတာ။ တွေ့ရ တိုင်းလည်း ကျမ၀မ်းသာပါတယ်။ ကျမတခါတလေ စိတ်ဆိုးရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ပြည်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့ အဖွဲ့ဝင်တွေ လုပ်ပုံကိုင်ပုံမဟုတ်လို့။ ဒါပေမယ့် အဲလို စိတ်ဆိုးရတဲ့အခါကျရင်တောင်မှ ပြည်သူတွေကနေ ပြီး ပြုံးပြံးရွှင်ရွှင်နဲ့ ကျမကို ကြိုဆိုတဲ့အခါ ဒီစိတ်ဆိုးတာတွေ ပြေရပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ။
“အခု တော်တော်လည်း မှောင်နေပြီဆိုတော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျမ တောင်းပန်စရာ တခုရှိသေးတယ်။ ဒီလိုမှောင်တဲ့အချိန်ထိ စောင့်ရ အောင် လုပ်ခဲ့တာကို ကျမတောင်းပန်ပါတယ်။ အဲဒါက ကျမတို့ မနက်တုန်းက မန္တလေးကနေပြီး မုံရွာကို လာတော့ မုံရွာပြည်သူတွေက အင်မ တန်မှ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုလို့ တော်တော် နောက်ကျသွားတယ်။ လမ်းမှာ ဖြည်းဖြည်းပဲ သွား ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမတို့အရောက် နောက်ကျတယ်။ နောက်ကျလို့ လမ်းမှာ ကြိုဆိုတဲ့ ရွာသားတွေကို ကျမ အကုန်လုံး မနှုတ် ဆက် နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒါကြောင့် လမ်းမှာ မနှုတ် ဆက်ခဲ့ရတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကို တောင်းပန်ပါတယ်။ အခုလို မှောင်တဲ့အထိ စောင့် ရတဲ့ ဒီမှာ ရောက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအားလုံးကိုလည်း တောင်းပန်ပါတယ်။
“နောင်ဆိုရင်လည်း ကျမတို့ အများကြီး အတူတူလုပ်ရဦးမယ်။ ဒီလို မျက်နှာချင်းဆိုင် မတွေ့နိုင်သည့် တိုင် အောင် ကျမတို့နိုင်ငံ ကောင်းကျိုး အတွက် အားလုံး အတူလုပ်ရမှာပဲ။ အဝေးကနေလည်း ကျမတို့ ဆက်ပြီးလုပ်သွားရမှာပဲ။ တချို့ ကျတော့လည်း ကျမတို့ရဲ့ ရှေးရေစက်အရ တခါပြန်ပြီး နီးနီးကပ်ကပ် ဆုံနိုင်မယ့်သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ ဒီလို နီးနီးကပ်ကပ် မဆုံနိုင်ရင် တောင်မှ တချိန်တခါမှာ ကျမတို့ဟာ အတူတူ ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ ပြဿနာတွေအတွက် စဉ်းစားပိုင်ခွင့် အတူတူထိုင်ပြီးတော့ တယောက်နဲ့ တယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်ပိုင်ခွင့်ရရမယ်လို့ မှတ် သားထားပါမယ်။ ကျမ ရင်ထဲမှာ ထိန်းသိမ်းထားပါမယ်လို့ ပြောရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေ။ ဘေးရန်ကင်းပါစေ။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိန့်အခွန်းအစပိုင်း အသံဖိုင် ရရှိမှု မရှင်းလင်းတဲ့အတွက် အပြည့်အစုံကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်မရ
စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာခရိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လက်ပန်းတောင်းကြေးနီ စီမံ ကိန်းကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြနေတဲ့ သပိတ်စခန်းတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းက အင်းအားသုံး ဖြိုခွဲအပြီးမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပုလဲ မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်ခင် စန်းလှိုင်စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက် က တာဝန်ရှိသူတွေကို သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ တွေ့ဆုံခွင့် မရခဲ့ဘူး လို့ ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
“ကျမတို့ ဆွေးနွေးဖို့ ကမ်းလှမ်းတာ အဲက တာဝန်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံး ဘယ်သူမှ ကျမတို့နဲ့ တွေ့ဖို့ လက်မခံပါဘူး။ ကုမ္ပဏီရှေ့မှာ ကျ မ ၁ နာရီ လောက် ရပ်ပြီး တွေ့ဆုံဖို့ရာ အကြောင်းကြားတာကို ဘယ်သူမှ အကြောင်းမ ပြန်ပါ ဘူး။”
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဆန္ဒပြသမားတွေကို အင်အားသုံးဖြိုခွဲခဲ့တဲ့အတွက် အခု ချိန်ထိ ၇၀ ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီး ၂၇ ဦးကတော့ စိုးရိမ်ရတယ်လို့ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က ပြောပါတယ်။
ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်ဟာ မုံရွာမြို့ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မနက်ပိုင်းက ဆန္ဒပြသမားတွေ ဖြိုခွဲခံရတာနဲ့ ပတ် သက်ပြီး အသေးစိတ် တင်ပြသွားမယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
မွန်သမိုင်းသုတေသနအဖွဲ့ဖျက်သိမ်းသည့်သတင်းမဟုတ်မ မှန်ကြောင်း အဖွဲ့ဝင် များပြော
လွန်ခဲ့သည်လတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော မွန်သမိုင်းသုတေသနအဖွဲ့ ဖျက်သိမ်း လိုက်သည့်သတင်း မဟုတ်မမှန်ကြောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ် သူမွန်ပြည်သစ် ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့ဝင် နိုင်တလညီက ပြောသည်။
“လိုအပ်လို့ မွန်သမိုင်းသုတေသနအဖွဲ့ ကိုဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုရင် အဖွဲ့ဝင်တွေ အားလုံး အစည်း အ ဝေးထိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပေါ့၊ အခုဟာက သူသ ဘောနဲ့သူ အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးအနေနဲ့ စာထုတ်တာ တရားဝင်မှုလည်းမ ရှိပါဘူး၊ သူ့တစ်ဦးတည်းအမြင်ပဲ၊ အဖွဲ့အစည်း ရဲ့သဘောထား မဟုတ် ဘူး” ဟု နိုင်တလညီက ပြောသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့စွဲ၊ စာအမှတ်-မသတဖ/၄/၂၀၁၂ ဖြင့် မွန် သမိုင်းသုတေသနအဖွဲ့ အထွေထွေမင်းခင်မောင်လေး လက်မှတ်ရေးထိုး ၍ အသိပေးအကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ခဲ့ရာ မိတ္တူကို အဖွဲ့ဝင်အားလုံးထံအတူ မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့လည်း ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု ဖေါ်ပြပါရှိသည်။
ပေးပို့စာ အပိုဒ်(၁)တွင် ၃၀-၁၁-၂၀၁၂ မှ ၂-၁၂-၂၀၁၂ အထိပြုလုပ်မည့် ဒေါက်တာချစ်စံဝင်း ဦးဆောင်သော ပျူလူမျိုးနှင့် ပျူနိုင်ငံတော် သု တေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲအား ကန့်ကွက်တားမြစ်ရန် အတွက် မွန်သမိုင်းသုတေသနအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု နိဒါန်းချီရေး သားခဲ့ သည်။
နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ပျူလူမျိုးနှင့် ပျူနိုင်ငံတော်သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲ ရပ်ဆိုင်းသွားသည့်အတွက် မွန်သမိုင်းသု တေသ နအဖွဲ့၏လုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်၍ အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းကြောင်း အကြောင်းကြားစာများ ယမန်နေ့စွဲဖြင့် ရေးသားပေးပို့ခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည်။
သို့ရာတွင် ရန်ကုန်၊ မွန်အမျိုးသားနေ့ကျင်းပရေးအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်စိုးကြည်က “ကျနော် သိရသလောက်တော့ အဲပျူဒီစာတမ်း ဖတ်ပွဲ ကျင်းပဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမယ့် မွန်ဒေသတွေဟာ ပျူနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်း စာတမ်းတွေ ဖတ် ဖြစ်မဖြစ်တော့ မသေချာဘူး၊ မူလစီ စဉ်ထားသလို ၃ ရက်တိတိဆိုတာလည်း ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်၊ အစီအစဉ်အချို့ပြောင်းလိုက်တာ ကြားမိတယ်” ဟု ပြောသည်။
အထက်ပါ ပျူလူမျိုးနှင့် ပျူနိုင်ငံတော်သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် မွန်တို့၏မြို့ဟောင်း သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ(သထုံ) ဒေသအား ပျူလူမျိုးများ အစော ဆုံးဝင်ရောက်လာသည့် သမိုင်းလိမ်ပွဲတစ်ရပ် လုပ်ကြံဖန်တီးခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း မွန်တိုင်းရင်းသားတို့ယူဆကြသဖြင့် ယင်းစာ တမ်းဖတ်ပွဲ အား ကန့်ကွက်တားဆီးသွားရန် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်လျှက် ရှိသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုးက “မွန်ပြည်နယ်အစိုးရဝန်ကြီးအချို့က ဒီ ပျူစာတမ်းဖတ်ပွဲ မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးလို့ ကျ နော့်ကိုပြောလာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အတည်ပြုဖို့က အချိန်စောသေးတယ်၊ စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုသေးတယ်၊ မနေ့ကအထိတော့ ပျူစာတမ်းဖတ် ပွဲကိစ္စအစီအစဉ်မရပ်သေးဘူးလို့ ကျနော်သိထားတယ် ” ဟု ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင်လည်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် လွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင် အစိုးရဝန်ကြီးများ မွန် ပြည် နယ်သို့လာရောက်ပြီး ဒေသခံများနှင့် အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံမှုတွင် ဒေသခံမွန်တိုင်းရင်းသားတို့၏ တောင်းဆိုမှုအရ ပျူလူမျိုးနှင့် ပျူနိုင် ငံတော်သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲအား ပိတ်ပေးမည်ဟု ကတိပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ရွှေအဆင်းဝင်းသော သုဝဏ္ဏဘူမိပထမအကြိမ်ဒေသတွင်းစာတမ်းဖတ်ပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၃ နှင့် ၄ ရက်နေ့များတွင် မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန် ပြည်နယ်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ သုဝဏ္ဏဘုမ္မိသည် မွန်မြို့ဟောင်း သထုံဖြစ်ကြောင်း နယ်ပယ်အသီးသီးက သမိုင်းပညာရှင်အ တည်ပြု ကြ သည်။
မွန်သမိုင်းသုတေသနအဖွဲ့ကို အထင်ကရမွန်သံဃာတော်ကြီးများ၊ မွန်စာပေပညာရှင်များ၊ သမိုင်းသုတေသီများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီနှင့် စာပေ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် ၃၇ ဦးပါဝင်သော မွန်သမိုင်းသုတေသနအဖွဲ့ကို လွန်ခဲ့သော အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် နောက်ပြန်မဆုတ်ရန် ရှမ်းညီလာခံ တိုက်တွန်း
ပဋိပက္ခများ လုံးဝ အဆုံးသတ်၍ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် အထူးလိုအပ်နေပြီး နောက်ပြန်မဆုတ်သော ငြိမ်းချမ်း ရေး ဖြစ်စဉ်ကို ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ညီလာခံက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကြေညာလိုက်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲ’ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်သော ထိုညီလာခံကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ တော် ဝင်နှင်းဆီခန်းမတွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှ စ၍ သုံးရက်တိုင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ပဋိပက္ခများ ဆက်မဖြစ်စေရန် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည့် အခင်းအကျင်းများကို မိမိတို့ ပါဝင်သည့် အနေအထားမှအလေးအနက်ထားပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် မိမိတို့ အားလုံး စုပေါင်းအားဖြင့် နောက်ပြန်မဆုတ်သော ငြိမ်းချမ်း ရေး ဖြစ်စဉ်ကို နေရာအလိုက် အကောင်အ ထည် ဖော်နိုင်သည့် အခြေအနေများ ရောက်အောင် အချင်းချင်း ပံ့ပိုးမှုများ လုပ်၍ အထူး တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်သွားမည်” ဟု ညီလာခံအပြီး ထုတ်ပြန်သည့် သဘောထားကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
ညီလာခံသို့ ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီ ၃ ခု၊ ရှမ်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့နှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ အခြေစိုက် ရှမ်း လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်း ၁၁ ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြို့နယ်ပေါင်း ၄၂ မြို့နယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အထူးဖိတ်ကြားထားသူ ပညာရှင် ၁၇ ဦး အပါအဝင် စုစု ပေါင်း ၁၇ဝ ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရာတွင် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေးသည် အဓိကအချက် ဖြစ်၍ ယခုဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပရ သည် ဟု ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ဥက္ကဋ္ဌ ခွန်ထွန်းဦး က ပြောသည်။
“လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အကြောင်းတရားထဲမှာ တိုင်းရင်းသား ပြဿနာက အဓိက ဖြစ်နေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား ပြဿနာ ပြေ လည်နိုင်ဖို့ ဆိုရင် ဒီနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါ တယ်။ ထို့အတူ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု တည် ဆောက်ဖို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး မရှိဘဲ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တန်းတူမှု မရှိဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေး မရှိ နိုင်ပါဘူး” ဟု ညီလာခံ အဖွင့်နေ့တွင် ပြောကြား ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အငြိမ်းစား အင်္ဂလိပ်စာ ပါမောက္ခ ရှယ်လီ နန်းဟွမ်လိတ် ကလည်း “ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာငွေကြေးနဲ့ ဝယ်ယူလို့ မရ သလို အပေါ်ယံ ဟန်ဆောင်မှုနဲ့လည်း မရပါဘူး။ ရင်ထဲက လာတဲ့ ယုံကြည်မှုကသာလျှင်ရေရှည် တည်တံ့မှာပါ။ တိုတိုပြောရရင် အ ပြော နဲ့ အလုပ်နဲ့ ညီပါစေ” ဟု ဆွေးနွေးပွဲ အဖွင့်အမှာစကားတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်၊ လက်ရှိ ရှမ်းနိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ စာပေ ယဉ်ကျေးမှု၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင် ရာ များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှမ်းလူမျိုးများ နေထိုင်ရာဒေသများတွင် ကောက်ယူရရှိခဲ့သောပြည်သူများ၏ ဆန္ဒသဘောထားနှင့် ရာစု ဝက်ကြာ နိုင်ငံ ရေး ပြဿနာ၏ ဒဏ်ကို ခံစားနေရသည့် ရှမ်းလူမျိုးများ၏ အခြေအနေများ ပါဝင်သည့် စာတမ်း ၂၃ စောင်ကို တင်ပြခဲ့ပြီး တင်ပြချက်များ အပေါ် အခြေခံ၍ ခေါင်းစဉ်အလိုက် အုပ်စုခွဲကာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ညီလာခံ ပထမနေ့တွင် ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP) နာယက စဝ်ဆေထဝ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ် (SNLD) ဥက္ကဋ္ဌ ခွန်ထွန်းဦး၊ ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (SNDP)၊ တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (TNDP)၊ ရှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS)နှင့် မိုင်းလား အထူးဒေသ ၄ (NDAA-ESS) မှ ကိုယ်စားလှယ်များက အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားများ၏ လိုလားချက် ဖြစ်သည့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးကို အသားပေး ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပထမနေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိမ်း နှင့် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုး တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
SSPP နာယက ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စဝ်ဆေထင် ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားအရေး သည် ထပ်တူထပ်မျှ အရေးကြီးပြီး ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို တိုင်းရင်းသားများ လိုလားသည့် ဖက်ဒရယ် အခြေခံသည့် ဖွဲ့စည်း ပုံဖြင့် အ စားထိုးရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောသည်။
ညီလာခံ၏ ရလဒ်ကို ကျေနပ်ကြောင်းနှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရန် ခွန်အားဖြစ်ကြောင်း ခွန်ထွန်းဦး က ပြောသည်။
“ရှမ်းပြည်နယ်က အဖွဲ့အစည်းအားလုံး စုစည်းနိုင်တဲ့ အနေအထားကို တွေ့ရတယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆက်လုပ်သွား ရမှာပေါ့” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“အရင်တုန်းက ဒီလိုမျိုး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဘယ်ပြောလို့ရမလဲ။ အခုက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ခွင့်ပေးတယ်။အနှောင့်အယှက်ဆိုတာ လည်း ဘာမှ လုံးဝ လုံးဝ မရှိတော့ဘူး။ ကျနော်တို့ကလည်း ကောင်းစေချင်တဲ့ ဆန္ဒပဲလေ။ ရတာ မရတာ အပထားပေါ့” ဟု သူက ဆက် ပြောသည်။
‘ရှမ်းပြည် အတိုင်ပင်ခံ ကောင်စီ’ ဖွဲ့စည်းမှုကြောင့် နိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်ဟု ဆိုကာ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလက ဦးခွန်ထွန်းဦး အပါအဝင် ခေါင်းဆောင် ကိုးဦးကို ဖမ်းဆီးပြီး ရှစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ် နှစ် ၇ဝ ကျော်မှ ၁ဝဝ ကျော်အထိ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအထဲမှ တဦးမှာ ထောင်တွင်း မှာပင် ကွယ်လွန် သွားခဲ့ရသည်။ ရှမ်းပြည် အတိုင်ပင်ခံ ကောင်စီ သည် လည်း အစိုးရ စေခိုင်းမှုကြောင့်သာ လုပ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ် သည်ဟု ဦးခွန် ထွန်းဦးက ဆိုသည်။
ယခုညီလာခံပြီးနောက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပါဝင်သည့်ညီလာခံကြီ်းကိုလည်းဆက် လက် ကျင်းပသွားရန် အစီအစဉ် ရှိကြောင်းလည်း ခွန်ထွန်းဦး က ပြောသည်။
ဘင်္ဂလာမှ ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်သို့ ကုလား ၆၀ ဦးအား မှောင်ခိုလမ်းများမှ ယ မန်နေ့က ထပ်မံပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယင်း မြန်မာ-ဘင်္ဂလာ နယ်စပ်မှောင်ခိုလမ်းများမှ တရားမ၀င် ပို့ဆောင်ခဲ့သော တပ်ဖွဲ့မှာ ကော့စ်ဘ ဇားမြို့ အခြေစိုက် BGB အမှတ် ၁၇၊ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်တာခ်နာ မြို့နယ် အခြေစိုက် BGB အမှတ် ၄၂ တို့က ဖမ်းဆီးပြီး ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း ယနေ့ဒေသထုတ် ဆော်မူဒြကာ ထော် သတင်းက ဆိုသည်။
ယင်းသတင်းက ပို့ဆောင်ခြင်းခံရသူများမှာ ဘင်ဒရိုဘင်ခရိုင် နတ်ချောင်းဆ ရီမြို့နယ်နှင့် ကော့စ်ဘဇားခရိုင်များမှ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဖမ်းဆီး ရမိပြီး ယင်းနေ့ အတွင်း အတင်းအဓမ္မ ပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြသည်။
BGBမှ ရခိုင်ပြည်သို့ အတင်းပို့ဆောင်သော ကုလားများမှာ ဘင်္ဂလာသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီး မှောင် ခိုစက်လှေများဖြင့် မလေးသို့ သွား ရန် ပြင်ဆင်နေကြချိန် ဘင်္ဂလာအာဏာပိုင်များက စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းကဲ့သို့ ပို့ ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း လက်ရှိမြန်မာလူထုနှင့် အစိုးရ ဦးသိန်းစိန်က ယင်းကုလားများအား တဘက်ဘင်္ဂလာမှ ကျူးကျော်ဝင်ရောက် လာသူများ ဖြစ် ကြောင်းနှင့် မြန်မာတွင် ယင်းလူမျိုးမရှိကြောင်း နိုင်တကာသို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တရားဝင် ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုထားသည်။
ထိုကဲ့သို့ ကုလားများအား ရခိုင်ပြည်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့မှုအား BGB အမှတ် ၄၂ တပ်ရင်းမှူး ဇာဟိဒ် ဟာဆန်နှင့် ၁၇ တပ်ရင်းမှူး ခါလေကူဇ္ဖာ မန် တို့က အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
ဘင်္ဂလာက မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက် ရခိုင်ပြည်သို့ နိုဝင်္ဘာလအတွင်း ကုလားစုစုပေါင်း ၆၀၀ နီးပါးအထိ အတင်းအဓမ္မ တရားမ၀င် မှောင် ခိုလမ်းများမှ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ကော့စ်ဘဇားမြို့မှ ထုတ်သည်သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
၆၇ ကြိမ်မြောက် ကုလ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် ရိုဟင်ဂျာ နာမည် သုံးစွဲခြင်းကို မြန်မာဘက်က ပယ်ချ
နိုဝင်္ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ တနင်္လာနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော (၆ရ) ကြိမ်မြောက်ကု လသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီ လာခံကြီး၏ (၄၃) ကြိမ်မြောက်တတိယကော်မ တီ အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည် နယ်တွင် ရှိသော မူဆလင် များကို ရို ဟင်ဂျာ လူမျိုး အဖြစ် ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့ခြင်းကိုမြန်မာဘက်ကပယ်ချလိုက် သည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဆို သည်မှာ မရှိကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ၏ ဆုံး ဖြတ်ချက်ထဲတွင် သုံး နှုန်းဖော်ပြထားသော အသုံးအနှုန်း အပေါ် မိမိတို့ ကိုယ် စားလှယ် အဖွဲ့အနေဖြင့်် အပြင်း အထန် ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည် နယ်အ တွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှု များမှာ ဘာသာရေးအရ ဖိနှိပ်မူကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာသော အကြမ်း ဖက်မှုများ မဟုတ်ဘဲ လူမှု အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုအ ကြား ဖြစ်ပွားခဲ့ သော ပဋိပက္ခသာ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်မှ ပြန်လည် တုံ့ပြန်ပြောဆို ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က ပဋိပက္ခ အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အထူး စိုးရိမ်မိကြောင်း၊ လူနည်းစု ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်များအပေါ်အကြမ်း ဖက် ဖိနှိပ်မူများကို လက်ခံနိုင်စရာ မရှိကြောင်း၊ မြန်မာ အစိုးရအနေဖြင့်လူနည်းစုဖြစ်သောသူတို့၏အခွင့်အရေးကိုအကာအကွယ်ပေး ရန်တောင်း ဆိုကြောင်း စသည့် အချက်များ ပါဝင်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်တရပ်ကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ၏ တတိယ ကော်မတီ ဆွေး နွေးပွဲ တွင် ချမှတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်ကလည်း ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံထားသူများမှာ ရွှေ့ပြောင်း ၀င်ရောက်လာသူ များသာဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ခွဲခြား သတ်မှတ်ရန် ကြိုးစားနေရာတွင် ရွှေ့ပြောင်း ၀င်ရောက်လာသူများ အဖြစ် မပြောဆိုဘဲ လူမျိုးစုတခု အဖြစ် သူတို့ဖာသာ ဖန်တည်းသတ်မှတ် ခြင်း မျိုးကို လက်ခံနိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားလူမျိုး စုများ အထဲတွင် ရိုဟင်ဂျာဆိုသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု မရှိပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ သတ်မှတ်မူမျိုးကို အစိုးရအဆက်ဆက် ဘယ်တုန်း ကမှ အသိအမှတ် မပြုခဲ့ဖူး ပါ ကြောင်း၊ ဤကဲ့သို့ အခြေအနေ မျိုးတွင် တိုင်းပြည်၏ တည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့် ကိုက်ညီပါက နိုင်ငံတွင်း မည်သည့် လူမှု အ၀န်းအ၀ိုင်း မဆို နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို မည်သည့် အခါ မှ မငြင်းပယ်ခဲ့ဘူးကြောင်းနှင့် ငြင်းပယ်မှာလည်း မဟုတ် ကြောင်း ပြောဆိုသည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာအနေဖြင့် တတိယ ကော်မီတီ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်ခံသော်လည်း ရိုဟင်ဂျာ အမည် သုံးစွဲခြင်းကို ကန့်ကွက် ကြောင်း ပြောဆိုသည်ဟု ရွိုက်တာ သတင်းတွင်လည်း ဖေါ်ပြသည်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အခြေအနေအတွက် စိုးရိမ်ကြောင်းနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သူများအားလုံး အ တွက် အကာအကွယ်ပေး ရန် တောင်းဆိုချက်များ လည်း ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ ရခိုင်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ ရခိုင်နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူမူ ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ တစ်စုံတစ်ရာ တုန့်ပြန်မူများ ယနေ့ထိ ထွက်ပေါ်လာခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာခရိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်တန့်ရေး ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုကို အာ ဏာပိုင်များက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခဲ့သော်လည်း လှုပ်ရှားမှုမှာ မပြီးဆုံးသွားဘဲ ဒေသခံများနှင့် အဖွဲ့အင်အားများ စုစည်းကာ ဆန္ဒထပ် ပြ မည် ဟု သပိတ် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
စီမံကိန်းရပ်တန့်ရေး တောင်းဆိုနေသော သပိတ်စခန်းများကို အစိုးရအာဏာပိုင်များက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခဲ့သော်လည်း ရဟန်းသံဃာ များ၊ ဒေသခံလူထုများနှင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ လက်ပတောင်းတောင် အရေး စိတ်ဝင်စားသူများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ထိုစီမံကိန်း ရပ်တန့် သွားသည် အထိ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု သပိတ်ခေါင်းဆောင်များက ပြောသည်။
“ဒီနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးစဉ်ရှိလို့ ကျနော်တို့တွေ ခဏငြိမ်မှာပါ။ ကွဲသွားတဲ့ လူစုတွေ လည်း ပြန်စုရင်းနဲ့ပေါ့၊ နောက် တနိုင်ငံ လုံးမှာ ရှိတဲ့ အဖွဲ့အသီးသီးကို အကြောင်းကြားပါမယ်၊ ပြီးရင် အထွေထွေသပိတ်ကို အင်နဲ့အား နဲ့ပြန်စမယ်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့ ကျ နော်တို့ကို ခုလိုဖြိုခွင်းတဲ့အပေါ် သမ္မတကို ကျနော်တို့ နားလည်ရခက်သွားပြီ” ဟု သပိတ်ခေါင်းဆောင် တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း နယ်မြေသို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယနေ့သွား ရောက် နေပြီး ပြည်သူလူထုကို စကားမပြောမီ မီးလောင်ဒဏ်ရာ ရသူများကို ဦးစွာ သွားရောက်တွေ့ဆုံမည်ဟု သိရသည်။
သပိတ်စခန်းများကို ယနေ့မနက် ၃ နာရီခန့်က မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ဒေသခံ အာဏာပိုင် အဖွဲ့များက ဝင်ရောက် ဖြိုခွဲခဲ့သဖြင့် ရဟန်းသံ ဃာ နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၇၀ ကျော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း NLD မှ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပုလဲမဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ် စား လှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဆန္ဒပြ သပိတ်စခန်းများထဲသို့ အာဏာပိုင်အဖွဲ့များက မီးသတ်ပိုက်များဖြင့်ထိုးခွဲခြင်း၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးများဖြင့် ပစ်ခွဲခြင်း၊ မီးဗုံးများဖြင့် ပစ် ခွဲခြင်း ပြုလုပ်ပြီးနောက် အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် “တွေ့တဲ့လူ အကုန်ရိုက် အကုန်ဖမ်း” ဟုဆိုကာ ဝင်ရောက်ရိုက်နက် ဖြိုခွဲ ခဲ့ကြောင်း အ ခင်းဖြစ် ပွားရာတွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော သပိတ်အဖွဲ့ဝင်များထံမှ ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုကြသည်။
ထိုအထဲမှ အတွင်းလူနာအဖြစ် သံဃာတော် ၂၂ ပါးနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၂ ဦး မီးစွဲလောင်ဒဏ်ရာများ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများဖြင့် မုံရွာ ဆေးရုံကြီး တွင် အရေးပေါ် ဆေးကုသမှုခံယူနေရကြောင်း သိရပြီး ဒဏ်ရာပြင်းထန်လွန်းသည့် သံဃာတော် ၂ ပါးကို မန္တလေး ဆေးရုံကြီးသို့ NLD ၏ အကူအ ညီဖြင့် ပို့ဆောင်ကုသလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“သပိတ်စခန်းတွေကို သူပုန်စခန်းဝင်စီးသလို မီးသတ်ပိုက်တွေနဲ့ထိုး၊ မျက်ရည်းယိုဗုံးတွေနဲ့ ပစ်ခွဲ၊ မီးလာင်ဗုံးတွေနဲ့ အရင်ပစ်ခွဲပြီး တွေ့ တဲ့လူ အကုန်လုံးရိုက်ဖမ်းဆိုပြီး ညာသံပေးပြီးဝင်ရိုက်တော့ မိတဲ့လူတွေလဲအရိုက်ခံ၊ အဖမ်းခံကြရ တယ် ကျနော်တို့တွေ အကုန်ထွက်ပြေး ကြပြီး လူ စုတွေကွဲကုန်တယ်” ဟု သပိတ်အဖွဲ့ထဲတွင် ပါဝင်သူ တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အာဏာပိုင်များက သပိတ်စခန်း ၆ ခုရှိသည့်အနက် စီမံကိန်းအတွင်း ဝမ်ပေါင်ကုန်မ္ပဏီရှေ့မှ သပိတ်စခန်းအပါအဝင် အဓိက စီမံကိန်း အဝင် အထွက် လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ သပိတ်စခန်းကြီး များကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သ ပိတ်စခန်း များတွင် ဆန္ဒပြနေသော ဒေသခံများနှင့် ပူးပေါင်း သပိတ်အဖွဲ့ဝင်များ ကိုယ်လွတ်ရုန်းထွက်ပြေး ခဲ့ကြရသည်ဟု ကာယကံရှင် များကပြော သည်။
အခင်းဖြစ်ပွားစဉ်တွင် ရဲတပ်ရင်းများ အလုံးအရင်းဖြင့် ဝင်ရောက် ရိုက်နက်ဖမ်းဆီးမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် သံဃာတော် အနည်းဆုံး ၆ ပါး နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ပျောက်ဆုံးနေသူများလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သပိတ်စခန်း လာ ရောက် သူ များ စီးနင်းလာသော ဆိုင်ကယ်များနှင့် သတင်းထောက်တချို့ စီးနင်းလာသော ကားများကို စုပုံကာ မီးရှို့ပစ်ခဲ့ ကြောင်း မျက် မြင်များက ပြော သည်။
ယင်းသို့ ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲရာတွင် အသုံးပြုသော မီးဗုံးများမှာ ရေစိုနေသော အရာဝတ္ထုများနှင့် အသားအရေကို စွဲလောင်ခြင်းကို သပိတ်အဖွဲ့ ဝင် များက နားမလည်နိုင်ဖြစ်ရကြောင်း မူလပက်ဖြန်းခဲ့သည့် ရေ သို့မဟုတ်၊ မီးဗုံးများတွင် ဓာတုပစ္စည်းများ ပါဝင်နိုင်ဟု သပိတ်အဖွဲ့ဝင် များ က သံသယ ရှိနေကြသည်။
အံ့သြစရာကောင်းတာက သူတို့ပစ်တဲ့ မီးဗုံးတွေက ရေစိုနေတဲ့နေရာတွေကို ပိုပြီးစွဲလောင်တာတွေ့ရတယ်၊ ဦးဇင်းတွေဆိုရင် အသားတွေ မီး စွဲလောင်ပြီးကို ကွာကျတယ်၊ ပြေးနေတုန်း မိတဲ့လူတွေရော၊ ဦးပဉ္ဇင်းတွေရော အကုန်ရိုက်တယ်၊ ဖမ်းသွားတယ်၊ ဘယ်နှစ်ယောက် မိ လဲ၊ သေလည်းဆိုတာ ကျနော်တို့လည်း လှည့်မကြည့်နိုင်ဘူး” ဟု သပိတ်အဖွဲ့ဝင် ဒေသခံတဦး က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယခု အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲမှုတွင် အသုံးပြုသော မီးလောင်ဗုံးမှာ ဖော့စ်ဖောရပ်စ် ပါဝင်သည့် မီးလောင်ဗုံးဖြစ်နိုင်သည်ဟု အငြိမ်းစား တပ် ကြပ်ကြီး တဦးက ပြောကြောင်း မုံရွာ အခြေစိုက် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်များ ဦးစီးထားသော ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီနှင့် တရုတ် ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေ သော အဆို ပါ ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် သဘာဝတောင်တန်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ ဒေသခံတို့၏ လယ်ယာမြေများ အဓမ္မ သိမ်းပိုက် ခံရခြင်း၊ စီမံ ကိန်းအညစ် အကြေးများမှ ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေခြင်းနှင့် အခြားဆိုးကျိုးများကို ထောက်ပြကာ ဒေသခံ ကျေးရွာ ၂၆ ရွာက ယခုနှစ် မေလမှစတင် ကာ နှစ်ဝက်ကျော်ကြာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီး ယနေ့မနက်ပိုင်းက အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းကို ရပ်တန့်ပေးရန် ဒေသခံများက တောင်းဆိုနေမှုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က အရေးပေါ် အ ဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး လွှတ်တော်က သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်း အာဏာပိုင်များဖက်က ညှိနှိုင်းပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲ ယခုကဲ့ သို့ ဖြိုခွင်းခဲ့သည်။
တော်ဝင် သစ်စက်အရေး ခုံသမာဓိကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီ